Dood Furan: Maa Loo Dhashaa Hargeysa, Mise Waa Layska Dhigi Karaa? « HiilDan.Com
Home › Dood (Debate) › Dood Furan: Maa Loo Dhashaa Hargeysa, Mise Waa Layska Dhigi Karaa?
Dood Furan: Maa Loo Dhashaa Hargeysa, Mise Waa Layska Dhigi Karaa? By hiildan on June 19, 2012	• ( 156 )
Caddaaladii reer Hargeysa ee Diimuqraaddiyaysnayd waxay dhigaysaa in aanu Hargeysa iska soo sharxi karin qof an u dhalan. Waxana is weydiin mudan, Hargeysa yaa u dhashay?, yaanse u dhalan?. Maa loo dhashaa Hargeysa? mise waa layska dhigi karaa?. Sidee u aragtiin?
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Dhama Koob Shaahoo Caddaysa, Dheehda Bilicda Boorama, Dhageysta Heesta Dhuuxii Boorama, Dhibaato Ma Jirto ‘hakuna matata’…!O G A Y S I I S * H I I L Q A R A N »Categories: Dood (Debate)	Related Articles
Sidii Samaroon Looga Qaaday Djibouti, Si La Mid Ah Ma Looga Qaadi Karaa Saylac?	Siyaasi Maxmad Jaamac Abgaal Vs Cali Aareeye	Ciisoow Meel Kasta Waan Idinkaga Badanahaye, Maxaad Yeeli Doontiin?	Burco Waxa Meeyar Cusub Ka Noqday Habar Jeclo, Saylacna Waxa Meeyar Ka Noqday Habar Xuseen: Miyayna Taasi Ahayn Isbadalkii KULMIYE Doonayay?	SNM: Qaranimaan Qaadanaye, Qabuurihii Hanagu Celinina..!	Siddeed Bilood Ka Hor Iyo Siddeed Bilood Kadib: Caddaaladda Somaliland, Markeebay Saxan Tahay?!	156 replies	»
Isaq Boy	June 19, 2012 • 12:18	Hargaysa waa caasimadda wadanka.. cid walna way ku nooshahay oy wax barasho, shaqo, caafimaad iyo tamashlaynaba u timaadaa.. umana malaynayo in uu jiro maanta qabiil soomaaliyeed oo aanay cidi ka joogini..
Sideedaba marka la qabanayo doorashooyinka golaha deegaanka.. (magacaa kuugu filan jawaab oo waa Gole Deegaan) magaalo iyo degmo walba waxa iska soo sharaxa inta deegaan ahaan u leh una badan.. Gudoomiyaha degmadana waxa loo doortaa mid ka mid ah inta meesha degan.. Cid kuu diidaysa manta Hargaysa inaad iska soo sharaxdaa ma jirto.. se laakiin waa waqti iyo juhdi lumis uun.. oo cid ku dooran doontaa iska yar hadaanad ku lahayn saldhig shacbi ood ku tiirsan tahay..
Waana isla sida aanad u sawiran karin nin Dhulbahante ah ama Habar-Jeclo ah oo golaha deegaanka ee Boorama iska soo sharaxaya.. ama aad ugu qoslaysid hadaad maqli lahayd nin Samaroona oo iska soo sharaxaya Golaha Deegaanka Ceerigaabo ama Laascaanood
Soomaali baynu nahay.. qabaa’il iyo jilbyo ayaynu ka koobanahay.. taariikh ahaana reer walba wuxuu lahaan jiray oo lagu ogaa inta uu geeliisa iyo xoolihiisu daaqaan ..
Waana ta sababtay in mar walba uu Ciise hogaamiyo golaha Deegaanka Zaylac oo dee isagaa u badan hadii kale cod kumuu soo bixi kareen..
Hargaysana waxa deegaan u leh Beesha reer Sh. Isaxaaq..
Waxana ugu tun wayn saddex jilib oo kala ah:
1) Sacad muuse 2) Arab 3) Ciidagale
Waxa kaloo iyana dega:
4) Isaxaaq (Habar Yoonis) 5)Ayuub 6)Gabooye..
Reply ↓	hiildan	June 19, 2012 • 12:36	Haddii an ka heli karo shan kun iyo in ka badan oo cod oo golaha degaanka ah, anigoo Gadabuursi ah maxaa dhacaya, maxaa iga hor taagan?. Ma Isaaq dhexdiisa ayaa Hargeysa isu haysta mise beelaha darifyada ayay u dan leeyihiin?
Reply ↓	cali maxamed	June 19, 2012 • 12:36	Mudane Hiildan
Ilaa bari hore ayaa Hargeisa idiin ku celinsay “waxaan ahay magaalo beeleed” Kollaba looma ogola cid aan beesha dhexe ahayn inay iska sharaxdo laakiin dhamaan ardaayada beeshu dhexe waa iska sharixi karaan,,,Laakiin beesha awdal oo u jirta degaan ahaan wax ka yar 30 km looma ogola.
Gobolka Woqooyi galbeed markii ay ahayd ayaa waxa uu daahir rayaale cidiyaha ugu dagaalamay sidii uu sharixi lahaa cali gabilay oo reer gabiley ah degaan iyo dad ahaanba…..ma u malaynaysaa in lagaa ogolaan doono maanta..
60kii ayaa nin ogaadeen ah iska sharaxay hargeisa wixii ka dhacayna waa tii la ogaa..
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 12:38	Hiildan..
Cid kuu diidaysaa ma jirto.. hadaad haysato cod aad ku soo baxdo.. ka waran hadaan anigu iska soo sharaxo Boorama ama Boon?
Reply ↓	hiildan	June 19, 2012 • 12:43	Waxan ogayn xildhibaan Cali Gabiley oo isu soo sharxay golaha wakiilada, in isagoo hargeysa dhex jooga indhaha ciid lagaga shubay, oo lagu yidhi gobolka Hargeysa oo Gabiley ku jirto iskama soo sharxi kartid. Imikana waxay soo saareen digniin la mid ah inay indhaha ciid kaga shubi doonaan qofkii an Hargeysa u dhalan ee iska soo sharxa golaha degaanka. Waa baaq hanjabaad iyo digniin ah, markaa miyaan la odhan karin dal iyo dawlad Diimuqraadi ah oo la yidhaahdo Somaliland ma jirto, waxase jira gobol beeleed?.
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 12:49	kkkkk HiildanYare Qalad buu ka Fahmay Dimuquraadiyadda.. iyo waxa uu yahay Gole Deegaanba.
ciid la isku shubayaa waa sheeko xariireed.. waakaas Cali Mareexaan Hargaysa dhex mushaaxaya.. Golaha Baarlamaanka ka xaadirayay ilaa maalintii la doortay.. hawlihiisana gudanaya..
Xeerka qoraya sidaa aad sheegayso soo ban dhig ee Distuurka ku jira… ama cid xukuumadda ah oo saas tidhi… Maqaal meel lagu qoray haka dhigin wax rasmiya..
kana jawaab su’aashayda ah: Ka waran nin Isaaqi hadii uu iska soo sharaxo Boon ama Boorama??
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 12:50	Cali Gabiley baan u jeedaa*
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 12:52	Waanad ku mahadsantahay Gabilaydaad deegaan ahaan qayb ka mid ah sheegan jirtay inaad na wada siisay kkkkkk maadaama ood tidhi nin Samaroonaa laga soo doortay doorashadii Baarlamaanka ood ka dhigtay wax ahaa mustaxiil inuu dhaco… kkkkk
Reply ↓	Geesi Makahil	June 19, 2012 • 13:01	Hiil dan
sxb waa ku sidee?
Cali Gabilay waa degaan.Waa Nin Bahar Aadan ah.Cida u diidi kartaa oo hooyo dhashay bal ha u diido.
Gabilay,Bahar Aadan,Habar Aboker iyo dhegawayneba way iska soo sharaxayaan.
Sxb dad dhintay baad u egtihiin walaahi,oo aan garanayn waxa socda.Waar ma Ninbaa meeshiisa loo diidi karaa.
Haday Gabilay ka hoos baxdo Hargeisa,dee waa ok .Laakiin inta Gabilay ka mid tahay Hargeisa dee Cali Gabilay iyo qaar kala way ka sharax yihiin..
Reply ↓	hiildan	June 19, 2012 • 13:04	Wanjalihii reer Itoobiyaad sxb meesha ku haysaa. Gabiley warkeeda ku daali maayo. Cali Gabiley wuu u dhashay wuuna ku dhashay, codkii dadkiisa ayuuna kusoo baxay, laakiin idinkaa ka dhigay wax lala yaabo. Imikana tii uunbaad daba socotiin.
Su’aasha jawaabteeda, MAYA walaal Boon iskama soo sharxi kartid iyo xitaa Boorama, oo dee ilama lihid, laakiin anigu waan kula leehay Hargeysa iyo Gabiley.
Reply ↓	hiildan	June 19, 2012 • 13:07	Geesi
Waar nimankani siday u galeen C/Gabiley miyaanad ogayn wakhtigii doorashada. Dumarkii iyo carruurtii ku soo direen oo ku yidhaahdeen indhaha ciid kaga shuba…kkkkkkkkk
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 13:14	Waa markaan hadalka kuu hagaajiyay.. kkkk ee Thanks i dheh sxb..
Reply ↓	hiildan	June 19, 2012 • 13:18	Isaaqoow warka noo balballaadhiya, oo kibirkaa iyo madhmadhkaa iyo indho ciid kaga rogaas, waxad uga jeediin iyo cidda ad ula jeediin naga dhaadhacsiiya?.
Reply ↓	Ali-Durgiye	June 19, 2012 • 13:19	@Issaq-boy
ha ka saarto maanta qajeelaad ka qoslaysay gawska hoostiisa markay reer boorama nagu xabeebiyaan Saylac iyo Djibouti, waaka labaddi daan iyo labaddi naasood lagu soo huluushay kkkkkkkkkkkkkk.
teeda kale hortaa aanu waligay ma tagin Hargeysa manaa kala aqaan laakiin halkan waxaa ila degan rag reer salaxlay ah oo markay Hargeysa iyo hab awal maqlan gafuurka murun-muuriya ee siday wax u jiraan?
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 13:22	Teeda kale inaad su’aashaa is waydiisaba may ahayn..
oo Samaroon intaan aqaanay -in yar mooyee- waxay jecelyihiin uun inay Yuusaan oy Calaacalaan..
Hankaaba ma iyagaa leh ay meelo kale iska soo sharaxayaan.. haday han leeyihiin oy rumaysan yihiin inay cadkooga goosan karayaan Urur Siyaasadeedyay furan lahaayeen barigii dhawayd.. oy raga wax la qaybsan lahaayeen intay yuusayaan uun sidii habar goblana.. lol
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 13:24	Ina Durgiye..
Aar show waxanaa ku haystay barigay fahmi waayi jireen “sidee buu Ciise mar walba Goblka Salal iyo Saylac godoomiyaha uga yahay golaha Deegaanka ugu badan yahay?” kkkkkkkkkk
Reply ↓	Geesi Makahil	June 19, 2012 • 13:28	Hiildan.
Waan ku fahmay waxaad isticmaashay “idinka”.Kaba soo qaad inay qaldameen kuwa aad sheegayso.Bal hadaad kuwaa dhaantid sacabka ayaan kuu timanaa oo waan iskaa garab taaganaa.
Dee laakiin waxa nacasnimo ah,markaad leedahay qaladkii hore uunbaan ku soconaynaa.No,ku socon mayno qaladkaa dhacay.Mid kale waan diidnay.Somaliland xabaal baan u qoday.
Wayna ku dhacasaa.
Reply ↓	hiildan	June 19, 2012 • 13:33	Isaaq Oldman,
Horta waxba ha isku kaaya soo jeedin Ciise, maanta waxa laysku hastaa Hargeysa ee Saylac layskuma haystee. Balse for your information, Degaanka degmada Saylac, golaha degaanka iyo golaha wakiiladaba mar walba waxa u badan Samaroon, adigu soo baadh.
Reply ↓	Geesi Makahil	June 19, 2012 • 13:33	Waar kan Isaaq wata naga hubsada.
Ma kuwii shalay isaaqoobay ayaa mise Isaaqii runta ahaa?
Dee haduu yahay kii shalay,Ceeb ayay igu tahay inan Isaaqnimi kula doodo.Hadii kale oo uu yahay kii runta ahaa,waan waydiin karaa waxa meesha ka jira.
Reply ↓	Geesi Makahil	June 19, 2012 • 13:37	Hiildan.
Maanta,1 darajo ayaan kor kuu qaaday.Hadalkaa aad ku tidhi kan wata Isaaq Boy..bravo..
Reply ↓	Geesi Makahil	June 19, 2012 • 13:40	Waar magaca Salal,wuxu Nin Maxamed case ah.Waxba haku daalin sxb.
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 13:43	Hiildan..
kkkkkkkkkkk waa caadi.. bacda iska fur.. iskana soo sharax Hargaysa iyo halkaad doonto.. ha is martiyayn.. wadanka waad nala leedahay.. ee raga wax la qaybso.. mininku mininkaagii waayelol
Marka la soo doorto golaha deegaanka.. inta la soo doortay baa iska sii dhex doorata Goddmiyaha Degmada.. markaa hadii ay Samaroon mar walba ugu badan yihiin Xilibaanada Golaha Deegaanka ZAylac .. maxay u doortaan nin Ciise ah hadana hadhow la wada naxaan ee shock-gu ugu dhacaa….?
caqli gal maaha sxb
Reply ↓	Jicimbir	June 19, 2012 • 13:45	Hargaysa dadka rer haragysa waa iskugu mid run ahanti ninka Hawiye iyo kan Daroor iyo kan Dhulmahante iyo Kan Samaroon wayo waxay u haystan meel iyagu gaar u leyihin cidna lalahayn iskan soo sharaxin ninkan Samaron Iyn kan Dhulmahante ugama gadisno ninka ka yimid muqdisho marka waxba yan la isku dalin Hargaysa maha casimada dalka oo dadka ka dhaxaysa balse waa magalo ay leyihiin isaaqu wana xarunta cunsuriyada hadan tusale soo qato waxan goob joog ka ahaa xiligi c/lahi yusuf ka talinayay muqdisho waxa loo sameyay golo degan marka dadka somaliyed way u dhanayen waxan ku jiray Samaron Mixile oo ka ahaa golaha deganka markasna waxay ahayd cadalada tan hargaysana lama ogolo nin samarona marka haku dalina wa magaalo isaaq leyahay
Reply ↓	Geesi Makahil	June 19, 2012 • 13:52	Diyaaradaasi waa tii laysay Cadawgii Somaliyeed snm..
Aadbaan ugu farxaa arageeda..
Reply ↓	hiildan	June 19, 2012 • 13:52	Isaaq,
Caqli gal way tahay marka xusbiyo iyo diimuqraaddiyad lagu loolamayo, oo waa Sidii Raayaale iyo Sayliciba soo saartay. Adiguse laylis guri u qaado(Home work) cidda ugu xildhibaano badan degaankaas Salal/Saylac.
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 13:54	Bar-kulankan Hiildan waxa isku heli jiray oo aaraada iyo fikradaha kala duwan ku gorfayn jiray rag iyo dumar wada caqli gal ah.. ee waa loo yara baahanaa mid mid Marfuucal-Qalama oo Attention Seeker ah. kkkkkk
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 13:58	Cabdiqaniyoow in Ciise Salal iyo Salayc u badan yahay Layli uma baahan sxb..
Reply ↓	hiildan	June 19, 2012 • 14:04	Warkii Hargeysa iigu celi, yaa loo dan leeyahay in indhaha ciid lagaga rogo, ma isaaq mise inta kale?. Take your time soo warayso dhawr qof, oo nagu soo war celi.
Reply ↓	Ali-Durgiye	June 19, 2012 • 14:05	Mawduuca yaan dhalan guurin saylac iyo ciisana markeega u dhaafa,
biyaha dhaca warkuna waa Hargeysa ninmaan issaq ahayn koob shaah ah kuma lahaa sida Booramaba gedabuursi mooye cid kali wax uga quudarayn
Reply ↓	Geesi Makahil	June 19, 2012 • 14:18	Anay way.Maxaa looga baahanyahay Hargeisa>
Caasimad maaha.so, wixi iskale ayay u taal.
Reply ↓	HaniMuufo	June 19, 2012 • 14:27	KKKKKKk war wan qoslay anigu Somalida iyagoon talada u dhiiban Jareerwayn iyo Gabooyo waligood ma nabadoobayso. Hargaisa anigu lamaba yaabani ee xitaa Muqdisho iyo Hargaysa in aay is fureen ayaa malin walba dhegeheena ka badatay lakin waa labo cunsur oo hoosta iska qaba sidaana welfare ku qaata ama Caydh saad u taqanaan kkkkkkkkkkkk.
Anuu qabiilka la ii sheegay in aan ka dhashay in uu jojiyo garaadkiisa ma siiyo isku dhererinta kursigaa baas ee Madaxwayne nimada kkkkkkk. Xitaa hadii badhkood qabriyada loo hooyey wili waa soo yuucan yihiin kkkkkk. Isaaquna waa la mid Daaroodkuna ka daran. Gabigood waa sidi cunsurtii reer Europa ee dadka gumaysan jiray. Cunsurtaana markay albabada dunidoo dhan wajiga looga soo dhuftay ayeey Obama as huis neger ka dhigteen masger asagoo ah. Black man with white heart. Kkkkkkkkkkk. Xaalka dunidoo dhan ayaa jiq ah. Ee sucuudigaba eega dumarkaa diricyada waawayn een cidna waxba u ogolayn ee boqortooyada isku sheegaya.
Aduunkuna waa wada Cunsur garacyo ah oo iska dhigaya xarfaan waawayn. Bal eega adinku America waligeed haweneey Madax wayne kama noqon. Jarmalkana Angela Merkel ayaa ugu horeysay haweeney awood u yeelato in aay xukunto.
Waxaan ogaaday in xitaa janada iyo naartan la sheego, afaare qabiil lagu galo wax kale iska daaye. Janada marka la fasirayaa dad cad cad iyo xuural cayn ayaa image naloo siiyaa kkkkkkkkkk. Bal aduu wax ka dheh. Aduun iyo aaqiro meel nabadi taalo ayaan ba waayey lolz. Anuu jabhad ayaan aqiiro ka noqon gorile ah ileen xuural cayntu waa naag cadaan ah sida image keeda loo sheegay hahaha. Hadii aan naarta galo janada waan soo weerari kkkkkkkkkkk. Ilaa aan qabsdo ama subaga iyo malabka ka soo bililiqeysto kkkkkkkkkkk. Arinta isku soo duuduub. Aduunkan dumar iyo maato ayaa victim ku ah. Kuwa laga tiro badanyahay ama looga hormaray waxyaabaha la caabudana warkooga ba daa. Is reeb reeb ilaa aan noqono Tariikh sida dinosauris ka ah. Adanuhu kalarkuu isku dhegenaan. Kaga darane aaqiradi la sheegayna iyana waa case cale oo marka halkaa laysugu tago ilama aha in nabadi taal. Kkkkkkkkkkk waxaan maqli jiray in malaaigo silsilado gacmaha ku haystaan dadka naarta galaa gaar ka hayaan. Kuwaasna mar uun baa la soo dhaafi oo Janada laysku qabsan kkkkkkkkkk. Arintu waa yaa og?. iyo Ma ogi!. Aduunkaan ku raxaayso iska na ilaali kadeedka inta kalena ignore ku samee.
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 14:39	Hani..
Maanta ma sidii kalaa.. wax walba kaftan haka dayin ee Istaaqfurulayso huuno.. haday kaa dhab tahay waxaad ku hadlaysaana dib u ashahaado..
waa iga daacad waanadaasi..
Reply ↓	godan	June 19, 2012 • 14:55	Hannimuufo salaan sare waan maqli jiray Somali Christian ah mase moodayn inay sidan iigu dhow yihiin kama soo horjeedo anigu laakiin iska ilaali dad aan ogay waxaasi ma qaataan dhagax ayaa lagu dilaa dadkaa kkkkkkkkkkkkkk be carefull sis.
Reply ↓	GALBEEDI	June 19, 2012 • 15:47	Hargaysa
dee cida iska leh uun baa iska sharaxi wuxuna hada waa gole deegaan maaha barlaman sidaa ha looola wada socdo
sxb runta maxad uga been sheegtaa walaahi baan ku dhaarta markii doorashadu gabilay baarlankii ka dhacaysay waan joogay oo adeerkay baa musharax ka ahaa IBRAAHIN KACAAN DEE SIDA olalaha cali gabilay u wadayna waan u joogay oo xitaa cid la hadashay maan arag oo waliba dad uu borama ka soo guray baa u codeeyay oo awoodnay in aan safka ay ku jiraan laag kaga dareerino why reer borama kama codayn karan gabilay lkn samaroonka gabilay u dhashay intay doonaan ha ahaadaan way u furan tahay golaha deeganka gabilay ha iska sharaxaan waxay kal soo bixi karaan lkn hargaysa aan tago waxan u arkaa gb dee saylac iyo borama bay iska sharaxi doonaan taas hadaad wadaan waa mid idinka inii gaar ah lkn hargaysa ninkii leh uun baa ka soo baxayaa hadaad xitaa aan kuu daynaba ma kula tahay in aad ka soo bixi kartid?
Reply ↓	HaniMuufo	June 19, 2012 • 16:22	Kkkkkkkkkk Godan iyo Isaq Boy,
Anuu wixi aan arkay maqlay uun baan sheegay!. Diintana kama soo horjeedo Godaneey Cristiana ma ihi lakin laf cad ayaad toobin ku qabatay hahaha.
Dhagaxna cid igu dili kartaaba iska yar. Oo waxaba cajiib ah how corruption are religo’s Islamka haha. Waligoodba laan gaabka ama dadka dhulka qariibka ku ah ayeey dhagaxyo ku dilaan hahaha.
Waxaad ku garan kartaa bal fiiri inan tii yarayd ee lagu kufsaday Kismayo hadana dhagaxa lagu dilay. Qaxooti ayeey kismaayo ku ahayd Miss. Aisha Dhuxuloow qabiilkeedu meesha kama dhawayn waxay ka timid Gobolada dhexe ilaa dhoobayda ayeey dakeedu ku ekayeen. Waxa dhagaxa ku dilayna waxay ahayeen caade qaate yaal. Waxa kufsadayna Majeedheen haha very sad.
Walaalo diinta waa laga toocsan ileen idinkii aaminsanaa ayaaba sidan u dhaqmaya. Bage kan ka ka horeeyey ee looga hadalayey baahida aduu waad ka gaabsatay hahaha. Waayo waad ogtahay in Qabiilkaagu sidi filim u daawanayo dhacdada abaaraha. Cid uga dhawna ma jirto intaad soo jaacdaan ayaad u gaayn kartaa cuno iyo cabitaan iyo arad bixin iyo dawo. Laakin waad ka gaabsateen huuno ii sheeg waxaad diinta ugu hiilinayso hadaydaan ba ku dhaqmayn?. Hada ka hor ayaan lecture ka jeediyey goob in Athiestuhu diimaha ka bililiqeeystay dadka hahaha. Isagoon ku lahayn waan caabudaa iyo waan kugowrici iyo waan ku dhagaxyayn. Wixi diintu dadka fartayna wuu qabtaa kkkkkkk. Sow cajiib maaha?.
Waxaan tusaale uga dhigay kooxdi sida fiinta u ciyday markaan hadlayey. Diyuuradaha qumaatiga u kaca oo ruux wadnuhu istaagay ku soo dhinac degatay oo ruuxi bad baadinayso.
Iyo Haweeney tabalaysan iyo caruurteed uu nin wajaqaysani feedh la dhacayo oo askari duulaysaahi garba duub u xidhay hooyadiina ku huwinaysa go aay dhaxanta ka huwato biyana afka ugu qabanayaan kkkkkkk.
Bal IsaqBoy adinkoo diinta sheganaya maxaad u awoodi waydeen in aad Nobel action samaysaan oo aad na tustaan umada dhibataysan u gurmataan. Maxaaba dowlad ama qabiil keenay aaway bani adam nimadi iyo diinti waqtiga laysaga lumiyeey?.
Waxaaba la qaatay in aad buug sida qudrada loo beerto aqrisato oo aad beer yar xafada agteda ka soo gurato. Hadal badan haaman ma buuxshee ilaa inteen sugaa idinkoo isu naxariisanaya, aanan is aflagadaynayn, is xayirayn, isna qudh qoynayn una naxariista kuwa tamarta daran?.
Adeerayaaloow aan diinta horta iniga arko kadibna waan xushmayn hadii kale kalaya oo ani i dhagax yeeya. Isla habeenkaan naf go’o kun caruur oo iga daran ayaa la foolan hahaha weliba Isla islamku dhali una waqlali kkkkkkkkkk.
Reply ↓	Sahal	June 19, 2012 • 16:38	kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Hiildan waa runtii hadduu Boon ama Boorama Gudoomiya degaanka u doorto nin Ciise ah haddiii kale waa ” anagaa waxaa gacalnimo ku bixinay iyo calaacalkii ay daba dhigi jireen”
Ma, wax gacalnimo loogu diiqaa laga daba calaacalaa kkkkkkkk
Reply ↓	HaniMuufo	June 19, 2012 • 16:46	Hadaan dib ugu soo laabto markaan h
adlaye Muqdisho ayaan dhex tagnaa waagi maxkamadaha ayeey ahayd.
Dhalintii i dhegeysanaysay ugu dambayn markaan toban tusaale u soo qaatay. Waxay i yiraahdeen macalimada na dhegeyso!.
Waxaad sheegeyso oo aad nagu eedeyso waa runtaa, laakin meshaan arin wayn aa nagu gudbane, xogaa waa lays gaa gaabinaa camal nooh kkkkkkkkkkk.
Imisaa aamusan hadana u jeeda xaq darada?
Imisaa afku juuqda gabay hadana ololeynaysa
Imisaa isirkeed uun ka baqi aqirana ka qanaastay
Imisaa is leh yaan lagu irdhayn ood ubad waayin
Godan waad ku mahadsantahay xushmada aad dooqa adanaha u ogoshahay. Waxana jira in aan ku dhex dabalanayno camuud haha. Dadka diinta in aay difacaan raba ma awoodaan sababtoo ah waxay fartay ma sameyaan. Nafta lagoynayo hadeey runta sheegtana waa wadadda ugu sahlan aay awodaan kuwa in aay diin leeyihiin sheegta!. Lakin wadada ugu sahlani waa mida isla iyaga albabada ka xidhaysa. Maxay kula tahay in wadamada Muslinka ahi sidi aqal gaboobay marba cad uga dhacayo haha. Waxaa sababay wadada fudud aay qataan markay runta maqlaan. Maanta waxay taganyihiin sidii ruux washay oo isla hilbihiisi cadba mar goosanaya oo afka ku ridanaya. Waxa seeriga u haya iyo waxa ha cunin hilbahaga leh oo ciidamada soo dul dhigayana waa mid aan waxba caabudin!.
Tusalaha ugu dambeeya fiiriya Siria China iyo Rush ayaa u ogoladay in aay is layaan. NATO iyo USA na waxay ku calaan calayaan war iska daaya umada sidan waa qaracan iyo foolxumo!.
Reply ↓	HaniMuufo	June 19, 2012 • 16:54	SAHAL,
Aduu islam nimo halaga arko wadiga malin walba qabiil uun daba ordaya. Umadi jaarka kula ahayd ee kugu diinta ahaydna aadan dan dheg jalaq u siin dhibkooda. hahaha
Sadaqadi la sheegi jiray ee diintu sheegtay ma hilmamteen?
Maxaase gaalku idiinkugu soo gurmadaa marka dhib dhoco idinkoo?.
Maxad se mucaawinada gaalku keeni lahaa u ga xayidhan dadka sida Dowlada dhalin habaabis, Alshabaab, iyo dowlada Siria sadar muuqdo suaal ka dhan. Nin yohow anuu waxan kugu bartay in aad malin walbo ku doodo waxanan duxiba kaa racayn. Degmooyin abaaraysan anigaa leh daa gura ee aduu ma lihid kkkkkkkkkkkk. Waali intaa ka badan ma jirto.
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 19, 2012 • 17:34	Reer Hargeiysa waa runtood wayna ku saxsanyihiin inay ilaashadaan dhulkooda una diidaan cid kasta oo kasoo guurtay deegaankooda sida HJ iyo HY oo aan ahayn HY/Isxaaq reeraha kalana hadalkodaba daa.
Hiildan aduu Zeiylac ayaad Ciise ugasoo carartay unasoo faaruqisay fulaynimo darteed markaas baad doonaysaa inaad golaha deegaanka ka boobto reer Borama car Dila isku day inaad ka Voteyso dhagahaa lagaa tumi oo anagu cunsuriyiin baan nahay hana moodin sida reer Borama oo aad feedhahooda tirsatay.
Golaha deegaanka qof kastaaba waxuu ka Voteyni deegaankiisa maaha intood deegaankaaga cid kale usoo faaruqiso aad hadana deegaan nin kale aad is tidhaa ka codee ama iska sharax,
Zeiylac Ciisaa iskasoo sharaxa cid la loolantaana ma jirto hadii aad ku qabsato ehlul beytka reer Borama dee waa iska caadi hadii gobanimo kuugu daayaan oo ay isyidhaan waar nimanku way baqayaane bal u dhiga meelahaasi sanduuq xun oo parasite ah,
Dila farahaa la idin goyn oo dad cunsuri ah ayaa iska leh oo nin Zeiylac dhulkiisii uga yimid reero qayrkii ah kama Voteyn karo Dila iyo agagaarkeeda waa mamnuuc,Sidoo kale ninka u sharaxan golaha deegaanka waa inuu isna iskasoo sharaxo deegaankiisa iyo meesha uu u dhashay.
Nin Reer Dila ah iskamasoo sharaxi karo Zeiylac sidoo kale nin reer Zeiylac iskasoo sharaxo karo Borama lkn is dhexyaaca dadbaa ku macaashay “Ku Qabso ku qadi maydid” ninkastaa oo doonaaya in uu noqdo siyaasi ah xilibaan golaha deegaanka ha iskasoo sharaxo meesha uu deegaankiisu yahay oo ah salaanka uu kasoo fuulay siyaasada dawlada ilaa uu ka noqonaayo wasiir iyo meelo kasaraysa.
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 17:43	Hani
Huuno.. diin ma difaacayo.. oo aflagaado cid diinta wax kaga qaadaysaa ma jirto.. ee adaan ku difaacayaa.. kaana difaacayaa inaad dunuub waawayn dusha saarato.. Haka yeelin inuu shaydaanku kuu qurxiyo waxan aad ku hadlayso..
“Inuu aakhiro dulmi ka jiro” “inay janada cunsuriyadi taalo” “ku dheel dheel malaa’igta ilaahay”
waa HALLOW wayn.. iyo weedho khatar ah..
Towbada ha seegin walaashay…
Reply ↓	Sahal	June 19, 2012 • 17:46	Habaryar haiwiya iska dhiga
maxaa igu maagtay mise qofkalaad igu khaldaysaa. Dadkan dhibaataysan ee sheegaysidna dee wixii aan bixin karay waan bixiyey, waligayna waa bixin jirey waana tii aan raga Isaaq ku haystay inay isku koobeen gargaar iyo dhaqaale wixii dawladu lahaydba. Isaaq intuuna ii jawaabina dee waa digii ogaa in Gadabuursi i weerarey.
Diintana kolay aniga way iga nabad heshaa oo kuma jeesjeeso ee maxaad iga doonaysaa in aan idhaahdo.
Mawduuca aan fikirkayka ka dhiibanayana dee waxan u haystaytay in aan angu xor u ahay ee xoriyatal qawlkiina ma, isbaaraad u dhiganaysaa Hiildan Media dhexdeeda kkkkkkkkkkk
Reply ↓	Geesi Makahil	June 19, 2012 • 17:47	Waar heedhe Haregisa ayaa haysta?
Aderoow meesha ayadaaba u baahan dad dadkuse uma baahna Hargeisa.
Waar haday rabaan ha xidhaan albaabkeeeda,ayaa u baahan?
Sxb Magaalo iyo miyi ayaa la kala yahay.Hargeisa waxay cadaynasaa inay tahay miyi.
Haday tahay magaalo ama dad keedu Xadaarad leeeyihiin waxa kumay hadleen ee waxay ku hadli lahaayeen hadal dad ka u soo jida.
Aduunka lagu arag magaalo ay reer miyi u codeeyaan.
Magaalada waxa iska soo sharaxa dadka degan ee magaalada.Cida aya doonaan ha ahaan
Dad ka xaafada ayaa iska soo sharaxa hadii aad maqasho magaalo.Hadii miyi magaqashana waxa iska soo sharaxa daka miyiga,.
Marka Hargeisa waxa cadaysay inay tahay daabiyad ay reer leeyihiin.
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 19, 2012 • 18:04	Hi, Abaayo HaniMuufo maantana ma diintaad iska dhex aragtay Janadaan is baaro dhigan ku lahaa kkkk ilaa aakhiro ayay ku fekeraysaa bililiqo iyo boob xaqanaas,Hawiye Daarood baa aqli u ahaa 1960-1991,Daarood wuu ka yaacay 20 sano oo tiih ah ayay galeen maanta ayuu daarood usoo noqday waakuwaa Cabdi Wali Gaas dalada kaga ilaalinaaya roobka alloow Daarood u daa Hawiye,
Iskaga hadh kala dhexgalka Somaliland iyo shacabkeeda way tashadeen sadexdii dalaaqood ayay ku fureen Somalia,Caawaad naga yaabisay taadan yar ee dabada madaw leh oo aad diinta aflagaadaysay dhawr quluubta akhristayaasha iyo asxaabta.
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 18:05	Sahaloow caawa isku mar bay bilaabmayaan ciyaaraheenu.. Sweden baa ku tumaysa… France waa khashiiniin (waa halkii reer Jabuutigee) LOL
ninkii kaliyee hagayay Ukrain ee Shevchenko-na waa ka dhaawac caawa.. markaa waan buufinaynaa.. maca iyagoo garoonkooda ku ciyaaraya..
Reply ↓	HaniMuufo	June 19, 2012 • 19:14	Derbi,
Kkkkkk Hadadan ila sheekeysan ma noolaan kartid ayaa la yiri hahaha. Ilaa iyo hada waxaan ahay ma taqaanid lakin waa iga daba dhawaaqdaa mar walbo sidi shimbirta foosha xun ee Babagai la yiraahdo lolz.
Iska sheego in aad ii dhimanayso oo aad ii dhiig baxayso adi iyo ilaaha aad beenta beenta ka abuuraysaan cisho walbo saaxiibo ayaan nahay waa dhiigayga hahaha.
Bililiqaduna waa wax iska caadi ah. Mucaawinada gaalku na siiyo sowdinka Dhalin habaabiseey isbaradu iniigu taalo dekeda Berbera ee guryo sidi kuwii Booli Qaran la oran jiray ka dhistay ee ku yiil duleedka Muqdisho. Fack qabiil adiguna waxaad la mid tahay hablaha caloosha ka ciyara ee waxad na ka niikisaa meeshii lagaa casuumo.
Habo waan xayran sanahay maanta luuqi umada tabalaysan looga hadlayey Makahiil iyo Maxaad Case ayaa isku af lagadaynaya. Sow Pizaar maaha? Doqon walba intuu shaadh qabiil ama diin soo xidhuu meshaa kuu soo yuucan yahay.
Maanta intaan wixiyoo dhan shaadh u geliyaan shalambood u diray kkkkkk. Waaxana kugu qalday odayki afarta xabo ee timaha lah ee Ali – Durgiye ahaa kkkkkkk.
Waryaa Derbi Doqonoow pc ayaa iga culus waxan mar dhow ku soo diri Hablaha caloosha ka ciyaaro film ah sida aay isu ruxayaan markaan daawada bilaa caleeg adiga ayaa igu soo dhaco oo Siilaanyo hortiisa taagan oo is lulaya bidaartii dheereydna saaray bururko kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Aloow qurux badnidaa Derbi Doqonoow markaad ciyaartaa ciyarayso Illusion waynaa Hani waaxan imagin sameeyey ma malayn kartid iyo qoob ka ciyaarkaaga quruxdiisa ana sali ayaan ku fadhiyaa dainsty ga meesha uu ku dhamaado ayaan shiishad ku cabi oo meshaa ka dhoola cadayn kkkkk. Ileen waxaan ahay lama huraan.
Reply ↓	HaniMuufo	June 19, 2012 • 19:42	Derbi Doqon,
Ilaa malintaan ku maqlay adoo iska dhigayo wax taabacsan Dowlada dhalinhabaabis. Qosol ayaan af labadii waaxday. Waxaad sheegeyso iyo xiiqidadoo dhan hal sawir ayaan ka haystaa. Adigoo markaan aduun soo qasna noo ciyarayo oo waxaad adiga dhanba tahay instrument lagu raxaysto kadib marka madaxu nasoo daalo sida aan qiyaamo ugu mashquulsanahay. Waxaa tahay kuwa naloo sii diyaariyo si aan u qosolno. Ila daawo sida aad u niikinayso wajigeena.
Labo kala bariday kala war la gebigaaba agtayda waxad ka tahay sida wiilkan noo ciyaaraya mmmmmm. Amezing kadibna waan kuu sacbin markaad howshada interteinment ga ah kuu dhamaato. jeegadana waa lagu siin wuu sii saxiixan hayay hahaha.
Reply ↓	gudoon	June 20, 2012 • 01:54	hani ma siilaayu u niikinaya cajiib aad ban u qoslay kkkk
Reply ↓	Sahal	June 19, 2012 • 20:03	Isaaq boy
Dee anigu caawa Ciisaha calibaan u daayay oo Vinking baan ahay ee la soco kkkkkkk Labadeenuba waan gaccansaraynaa just now.
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 20:31	show Swedish baad ahayd.. meesha xunee cidlo cidlada ah kkkkk.
hadaa waynu hogaaminaynaa so far… rimuut kii baan ku daalay sidaan kolba mid u eegayay labada ciyaarood..
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 20:41	Yessssssssssssss sidaasay Bani Axmadkii labaduba ugu soo gudbeen Quarter Finals-ka
Well done bani Axmads lol inkastoo ragii ciise caawa la tumay lol hadana still way soo gudbeen
Reply ↓	Sahal	June 19, 2012 • 20:47	KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Ciise waan ka badiyey caawa lkn waxba iiguma taalo. Maxaase iga galay shaad Ciise uunban iska xedhan ama Bin Axmed kkkkkkkkkk
Reply ↓	Isaq Boy	June 19, 2012 • 20:54	Sahal
Reply ↓	hiildan	June 19, 2012 • 21:14	Baxsaneey Hargeysaay, Beertii Xorriyaddaay
Reply ↓	mustafe	June 19, 2012 • 21:28	Hargisa waa magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed kama nuwano sida Moqdisho oo Hawiye loo daba fadhiisto, Djbouti oo Ciise loo daba fashiisto, Borama, Samaroon, Baydhabo Digil/Midhifle. Markaas hadii ay yiraahdeen Gadhxajis, H.Awdal iyo jaabo jaabaha kale sida ayuub iyo arab waxaan ku abtirsanin iskama sharixi karaan yaan la dhibsan waana runtood. H.Jecley ujeedaan waayo Soomaalida kale way ogyihiin in meeshani habro ka taliyaan. Ninka Daroor ku dhashey H.Yonisba ka wakiila, ka jabuutina H.Awal, H.Jeclona Caynabo.
Dadka inta aan sadexdaas aheyna waa ku dulsaaroo hadii ayku nabad galaanbey faa’iido joogaan. Soomaalida mudo labaadan sanadooda midhi umey kordhin. Beelwalba shaakhka weynbey tolatey markaas arkeysaa in shaakhkii markuu uskagoobey cid maydhaba la waayey.waxase shaakhkii ugu usgagsanaa xidhan SNM oo hada xagaa iyo Sharif doobiilahiisa dooneysa iney kusoo baydhaan kkk. Dayaaradani markii hore markaan arko waana nixi jirey oo waxan odhan jirey masaakiin shicibey laysey. What they have done lately to other people it this has backfire. Hadase waxa ii cadaadey in SNM iyo cunsuriyeedii lagula dagaalanaayey. Waxase kasii daran dadka wali buni Aaxdaa oo dano siyaasadeed ahaa xiligoodiina dhacey qosolka moodey. Ciise, Samaroon iyo Isaaq meela iska soo galaan. Laakiin markii nimadkan SNM lagaga adkaadey siyaasadii Soomaaliya waxey la yimaadeen faqooq ay darahooda ka arkeen sida Binu-Axmad oo kale.
Reply ↓	mustafe	June 19, 2012 • 21:38	ku darsoo sadexdaa reer Ciise, Samaroon iyo Isaaq degaanadooda ayaa isku xiga wax intaa dhaafsiisani majirto walaa binuu binuu Haashim walaa binuu binuu Axmad walaa diriir. The reason snm put this warplane on displayed was to when international recognition that didn’t work because people know it was partially SNM who fought on Hargisa streets. Muxuu Siyad Bare dameeyey dee wuu isku burburiyey markey ka bixi waayeen. Dabadeedna Itoobiyaa dib loogu caliyey ilaa ilaahey soo direy USC oo Siyadka horeysey dhulkoodhan. Laakiin iyaguna masaakiintii Xamar Cadka iyo Daroodkii degaanaa Muqdishu dib ugu laabmey oo dhibaateeyey.
Reply ↓	mustafe	June 19, 2012 • 21:39	correction i mean to win international recognition, not when
Reply ↓	godan	June 19, 2012 • 22:14	Samaroon inaguna waa inaan kaarihii xabashida ee layna dul mariyay saarnaa suuqa Boorame dhexdiisa si loo xasuusto mujaahidiintii la xasuuqay.Mise dadna dhiigoodu waa diamond dadna dhuxul.
Reply ↓	godan	June 19, 2012 • 22:15	Kuwee saaraya hadayna weerar igu soo qaadin ayaan nasiib leeyay.
Reply ↓	godan	June 19, 2012 • 22:39	Axmad Guray dagaalkii uu galiyo gulufkii uu qaaday
Geediga hayaankuu ku tagay Goondar dhinaceeda
Jaamac gabayadiisii hadaan gobol ka soo qaato
Gadhwadkii Amxaarada markuu gawraca u jiiday
Galayuus goobtuu ku dilay galawadii naaxday
Geed Soomaalka goortuu ku furay ciidan garab weynle
Askartii uu soo guulay iyo geeshka la hayaamay
Gayigii uu sii maray iyo dadkuu sii halguranayay
Muslinimo inay soo gubtoo gibina mooyaane
Gadabursi bay wada ahayd birimadii guude
isaguna ciduu galo ayay gari ka joogtaaye
Girid iyo awow iyo intaan sheegto oday guuna
Iska daa gadaamaha dushiyo guudka Samaroone
Guntintuu ka sii yahay ayay gudin ku seereene
Taariikhda kii gadinayaa gacalow yeelkiiye
Gabanadii ka joogaan badhkood nolol ku gaadhaaye
Gar ilaah la dhigayaa iyo arlada ugu gayooyaaba
Ninkay taasi gubaysaa isagu girid ha doon doonto
Oo geesi kale ha raadsado dadkana yaanu gadafaynin
Afartaasi guuxi baddiyo gudgude roobaad dhe
Gantaaladii Ugaaskiyo Kunciil gucumadiisi dhe
Gabayadii Aw Yaale iyo gacamadiisii dhe
Galool ubax ku yaaliyo geedkii Harawaad dhe
Reply ↓	godan	June 19, 2012 • 23:09	Graet pictures was like traveling back in time.
Reply ↓	Tallman	June 20, 2012 • 01:56	Horta Hani aad baad u khaldantahay,Darbi kaliya maahee dadkii oo dhan baa khaladkaaga ku tusaya,laakiin adna waad isdifaacaysaa uun.Waxaan ku weydiinayaa Hani Su’aalo ay kaala xishoodeen Darbi Samaroon,Sahal iyo dad kale.Suaalahaas waa 1) Ma aaminsantahay Diinta Islamka in ay tahay Diinta kaliya ee saxda ah waxa kalana ay wada beenyihiin!2 Ma aaminsantahay in Muhammad(P.B.U.H) uu yahay Nabigii ugu dambeeyey hadii waxaasoo dhan aad haa tidhaa then iska iloow Ninkan baa Muslim sheegtay waxana wuu sameeyey etc.Qofka Muslimka ah qof buu dili karaa,wuu sinaysan karaa,Lacag buu xadi karaa,dambiyo badan buu sameyn karaa laakiin Joke kama dhigi karo Diinta sharafta leh ee Islaamka ama Nabigayaga Muhammed(P.B.U.H) sidii wasaqda Denmark ay sameeyeen ha ku dayan,midda 2aad is difaacidan badan daa anba marka aan khaldamo ee qofkale sida Marunbaa uu i saxo waan is qabtaa”Thank You”na waan u raaciyaa.Hadaan u soo noqdo Dooda Hargeisa,waxa aan ka jawaabayaa marka English la iigu macneeyo”GOLAHA DEEGAANKA”.
Reply ↓	Timacade	June 20, 2012 • 03:23	Waryaa Tallman….horta salaama calaykum, anigu iyo adigu we have not crossed path yet. Waxad tidhi qofka muslimka ahi waxbuu xadi karaa, waxbuu dili karaa, wuu sinaysan karaa, lakiin diinteena sharafta leh waxba kama sheegi kaor. Saxiib qofka waxaas oo dhan sameeya nabi gaan ku saliyaa oo waan ashahaataa kama dhigayso muslim. Muslinimadu waa ficil ee maaha believe kaliya. Haddii aw ficilkaagu aanu waafaqsanayn, believeka iyo teachings ka islaamka, dee muslim ma tihid. Anigu weliba, I will go one step further than Hannimuufo waxaanan odhan karaa somalida badankeedu maba aha muslim. waan kuugu dhaaran karaa inuu odayga kiristanka ah ee soupka u qaybiya masaakiinta downtownka magaalada aan deganahay, ee diinta u akhriya homeless ka ee aan weligii qof waxyeelayn ee aan weligii wax uu caawiyo mooyee aan dhibaato umad u keenin, inuu caydiid iyo cabdillahi yusuf jannada uga horaynayo. Haddii aad tidhaa jannada cabdilaahi yusuf baa uga horaynaya odaygaa aan kor kusoo sheegay, then, diinta aad sheegaysaa waxay reward garaynaysaa kuwa dariiq khaldan ku socday intay noolayeen lakiin ku afgobaadsanayey inay yihiin islaam. Somalidu Islaam maaha ee diintoodu waa qabiil, Jano ay isbaaro dhigtaan baad sheegaysaaye, xitaa kama ag dhawaanayaan……..kkkkkkk. off course waan generalize garaynayaa markaan leyahay somalidu islaam maaha, lakiin waxaan u jeedaa somalida badankeeda.
Reply ↓	Timacade	June 20, 2012 • 03:31	Hannimuufo…….Your writing is lucid and deeply philosophical. do let the ” kitaab gaab” scare you.
Reply ↓	Timacade	June 20, 2012 • 03:32	I meant ” DO no let……
Reply ↓	Gentleman	June 20, 2012 • 06:53	Hargeisa hadii xeerka caasimada loo sameeyo dhamaan muwaadininnta Somaliland ayaa iska sharixi kara siday ila tahy. Laakin intaan xeer la samayn hadii ay doorasho timaado waxay noqonaysaa uun in dadka gobolka hargeysa dega oo kaliya ay iska sharaxaan.
Markaa yaan la dhibsan arrimahan xeer ayaa qeexi doona midna waa dhib hadii caamadoo dhani way wax walba ka hadasho xal lama helayo waa in loo daayaa dadka masuliyiintq ah ee aynu maamulka dalkii u dooranay
Reply ↓	Gentleman	June 20, 2012 • 07:12	Magaalada boorama lafteeda beelaha isaaqu waxay u jiraan wax ka yar 15 km degaan ahaanoo waxay degan yihiin magaalada dila hareeraheeda iyo degmada baki barigeeda oo dhan. Sidoo kale degmada lughaya inteeda badan waxa degan beelo badanoo isaaqa ah.
Reply ↓	Colhaye	June 20, 2012 • 07:38	Gantelman adigu ma dagnid dhulka aad sheegayso laakin belaha samaroon waxay daganyihin galbeed barbara waqooyiga hargaysa xaafado ka mida hargaysa ilaa galbeedka hargaysa miyi tuulo ilaa dagmo way daganyihin marka ku dulnolaasho danbe ma jiro doono hadaad isku daydo inaad dafirto xaqa muwaadinimo waad eedi
Reply ↓	HaniMuufo	June 20, 2012 • 07:40	Timacade,
Huuno mahadsanid madaama aad fahantay ujeedadayda.
Isu tegey dhamaan
Wixi aan ahee
Kula soo ordee
Mad igaa aqbali
Somalia 3 malyan oo nagu fikrad ah ayaa ku dhex jira lakin xiriir wanaagsan malaha. Waxaa nagu gudban kuwo shaadh qabiil wata iyo kuwo shaadh diimeed wata. Waan la soconaa in aay qaldan yihiin lakin kuwo aad dhif iyo qaliil ah ayaa ka jawaabo dibin daabyada. Sida ani iyo adigoo kale. Waxaan ogaday in kuwa na hor boodayaahi badankood. Fikradaha aay haystaan aadba ka aqrisan karto shacbiga taabacsan kkkkkkkkkkkk. Waa cajiib Timacadoow arintan wax halaga bedelo hadii wanaag la la doonayo mustaqbalka dhulkaa iyo umadaa.
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 20, 2012 • 10:04	Gentallman
Waad ku riyoonaysaa adiga oo soo degay Dila agteeda Seemaal dilka ka dhaca iyo dagaalka CeelBardaale waa mid ku salaysan arintan maanta lagaga shanqadhiyay ee ah in aanu Hargeiysa nin aan u dhalan iska soo sharaxi karin sidaasoo kale ayaanan nin aan u dhalan gobolka SHEEKH NUUR iyo Dila agagaarkeeda nin aan u dhan iskasoo sharaxi karin,Baho Samaroon sida Dhagaweyne,Bahabar Abokor ,Bahabar Aadan iyo Bahabar Cabdallo dib u dejin ayaan u samayn doonaa dhulkii ay kasoo qaxeen dagaaladoo sokeeye ka dib Gabiley ilaa galbeedka Hareiysa ee Maroodi Jeex oo ah galbeedka Reer kasta oo Samaroon ah way iskasoo sharaxi karaan waayo waa deegaan Samaroon lkn Hargeiysa dhexdeeda ayaanay iska soo sharaxi karin wax Samaroon waa inay Gabiley yimaadaan ilaa Dila Baho Samaroon iyo Reer Nuur lkn wax u dhashay Isaaq oo Dila agteeda degani ma jiro oo iska soo sharaxi kara Gentallman dib u noqo sxb.
Hanimuufo……Timacade shaabad xun oo weyn buu sitaa oo uu qofka qaldan ugu dhufto kuu sheegi maayo qaladkiisa lkn wuxuu kugusii dhiiri galinayaa inaad diinta sii aflagaadayso sidii Ayaan Xirsi oo kale Hanimuufooy anuu intaad ani i caayayso waan kuu dulqadan lkn hadaad diinta Islaamka wax ka sheegto walaahi halkan ka kaa eryanaayo waa aniga intii hore gabadhnimada ayaan kugu dhawraayay lkn hadaad diinta usoo qaysatay ana kaama xishoon doono.
Timacade…… Bahal is nacay baad tahay oo cuqdadaysan anuu horaan kuu bartay oo isla judhii u horeysay eed halkan soo gashay waan ku fahmay qofkaad tahay iyo qoladaad ka tahayba Samaroon,Hanimuufo hadaad ku taageerto diinta ay caayayso dee adiga iyo doqoniimo kuu gaar ah,ficilka dabiilaasha kamay hadlin Hanimuufo oo qofka dabi sameeyaa islaamnimadiisa wax kamay sheegin haseyeeshee diinta Islaamka ayay toos u weerartay oo lkn hadii ay dadka dambiilayaasha iyo ficilada xun xun samaynaya ay weerato waa iska caadi haka toobad keento diinta ay wax ka sheegtay,dadka falalka xun samaynaaya hadii ay wax kasta ka sheegto waa caadi lkn ma ogolin inay diinta toos u abaarto.
Reply ↓	godan	June 20, 2012 • 10:17	Labo cilmaani salaan sare waan wada ognay in Soomaalidu tahay traditional society,qabiilkuna kala xoog wayn yahay diinta ay sheegtaan so what maxaad ka badali kartiin waa waxba.Waakuwa ku maahmaaha Fiqi tolkii kama janno tago ugana jeedaan wadaadka diinta bartayi markay tolkii noqoto xaqa ma sheegi karo e yaguu u hiilinaya kkkkkkkk ,funny .
Reply ↓	Ali-Durgiye	June 20, 2012 • 10:58	HaniMuufo in ay tahay Ayaan Hersi oo kale 6 bilood ka hor baan sheegay wax maanta nagu cusubna may sheegin,in u salmaan Rushdina nagu dheex jiray waa suurtagal.
Hiildan waxaan ka codsan lahayn meeshan isagaa ka masuul ah haddii wax illaahay iyo malaayktiisa deelqaaf ku ah lagu soo qoro oo aan ka aamusno waa dambi iyo gaalnimo aan dugsanay meel dad nuucaas ahi joogaan in aan soo booqano ama aan wax ku soo qorno ayaaba xaaraan ah marka Hiildan dambi ha nagu hoggaamin ee golahan si fiican no kala hor.
Reply ↓	Geesi Makahil	June 20, 2012 • 12:23	HaniMufo haba yaraatee wax qalad ah kamay diinbta Ilaamka iyo tu kale midna.HaniMufo waa Gabadh aoonle sida ka qoraadle ee kaga hadlasay dad iyo diinmaha ama wixi kale ee la caabudo.
Hani waxay si gaara u halasay Musliminta oo iska indho tira wixi waajubka ku ahaa:Ilaamnimo iyo Bini,aadamnimo.Oo ay 2ba ku dhawyihin wax shaadh ayaan loo gashado mar dan la leeyehey.
Hani Falsafad sare oo fiican ayay ka halaysay.Anu kulay aadbaan ugu helay arinkaa ay ka hadlay dhawr jeer ayuaan akhriyay qoraalkaasi.Marmarka qaarkood waaban qoslayay,halka aan qoraalada qaarkoona cadhoodo markan aro waxa ay xambaarsanyihiin.
Reply ↓	Timacade	June 20, 2012 • 12:25	Godan……..Heer sare. thank you and precisely my point. Siduu islaam ku yahay wadaadka dad ugu kala eexanaya qolo, mise idhaha ayaan iska tuuraynaa. Nabigeeni (CS) miyaanu odhan, La farqu beyna carabi wal cajimi ilaa bi taqwa. Dee qabylaadu taqwa maaha, therefore, wadaadkaasi basic tenents kii islaanimadaba lama socdo.muslina ma sheegan karo.
@Darbi…..Again, muraayad baan ku hordhigay, waxanad is aragtay inaad munaafaq #1 tahay, oo aanad muslimba ahayn, markaa dee waa caadadaadii inaad dib aniga ii eedayso. Darbi, fitnada aad halkan iyo meelo kale ka samaysaa, dad baa somalia u dhinta, community yo dhan ayey kala fogaysaa, adigaana ka masuula, dee sideed muslim ku noqon kartaa. Mise wajiga dhulka la saar shan jeer maalintii baa islaam kuu ah.
@ Ali- Durgiye…….Dee Saxiib diinta inaad sheegato waxa ka horeeya inaad qof moral leh basic moral kii, pre-requisite ka u ah diin kasta oo aduunka ka jirta. Dee qofka, fidnoolaha ah, ee beenta sheega ee dadka u kala eexda, qabiilka ka hor mariya islaanimada siduu muslim ku noqon karaa. Mise waxad leedahay, muslinimadu pre-requiste malaha ee waxaad doontana waad samayn kartaa, hadhawna istaafuru laah baa kugu filan iyo inay dadku u arkaan inaad muslim tahay. I do not buy it.
Reply ↓	Timacade	June 20, 2012 • 12:50	Hannimuufo……..Veel kusjes schat….
Reply ↓	gudoon	June 20, 2012 • 13:24	haba u jwaabina darbi laba wajiile, isagaa beenale ah diina aan waxba ka garanayn waa khaayin waa dirediraale ,maalinba inu qabiil tagerayo iska dhiga noociisa ignore saara wax jiraba maaha…god bless my awdalstate
Reply ↓	hiildan	June 20, 2012 • 13:34	Weger, waar meeshii waxbaa ka dhcay
HaniMuufo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, maantana maxaad keentay…you are full of surprises…Arraweelo.
Su’aal dhamaan (waa mid ka baxsan mawduuca)
Haddii ad laba xisbi ka kala dooran lahayd Somaliland iyo Somaliya labadee xisbi ayay noqon lahaayeen?. Waxan ka wadaa labada xisbi ee ad is odhan karto way soo celin karaan midnimadii Soomaaliyee ee mustaqbalka. Hal xisbi oo ka socda Somaliland iyo hal xisbi oo ka socda Soomaaliya?
Reply ↓	Ali-Durgiye	June 20, 2012 • 13:35	Timacadde,
Horta adiga kulama hadal,laakiin rasaas baan ku yara dul marshay si aad u soo boodo sidiina waad yeeshay kkkkkkk.
Inta ka dib dood iyo digdig midna looma baahna ee bal horta labada bloc mid uun soo gal; gaal iyo muslim midkeed tahay?
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 20, 2012 • 13:49	Hiildan…..Kahor inta aanan ka doodin naagta diinta aflagaadaysay ee Hanimuufo maxaad ka yeelaysaa commentikeeda meesha sida Cali Durkiye sheegay waxaa joogta AYAAN XIRSI iyo SALMAAN RUSHDI,Hanimuufo waa Ayaan Xirsi,Timacadena waa Salman Rushdi ha jopojaan diinta ay ku gafayaan hadii lkn ay sidaa kusii wadaan halkan way u dhamaatay oo cadho ilaahay ayaa ku jirta in diinta lagu car cayaaro oo kolba tu yaroo qurbaha ay tagtay wax weyn la yahay diinta naguma hor aflagaadayn karto,
Timacade…….Anuu Somalilander baan ahayn wax diradiraale leh la yidhaa meesha ma yaalo Somaliland waa dhulkaygii hadaanka cadhooday mar hore hadaan usoo noqday dadkayga Samaroon Ciise iyo Isaaq waa walaalahay midna uma ogoli dhib iyo dagaal sokeeye hanoolaadan reer Somaliland Samaroon Ciise iyo Isaaq inta kale hadii ay is waalaan gacan bir ah ayaan ku qaban doonaa hanoolaato Somaliland iyo ciida hooyo kii ka xuna afkaan ciida u daraynaa dhawaan oo cadawga Somaliland ee nagu dhex dhuumanaaya waan soo qabanaynaa dhawaan.
Aloow Borama ku gee Aloow Borama ku gee
Basraay waa balad kal gacal,Magaalo bildhaan qurxoon bu;dii weeyaan cilmiga.
Basraay nin habeen baryaa,bogaba kama saarayee
Aloow Borama ku gee
Reply ↓	timacade	June 20, 2012 • 14:01	Ali………define Muslim first and I will answer your question?
Reply ↓	Sahal	June 20, 2012 • 14:12	Tallman
Abti waatan warkii Cawaale Adden ee Allah ku dhaarshee Marunbaa mala rumaysankaraa kkkkkkkkk waa xafladdi 18 may. Mise 18 may ka dib ayuu Cawaale qabyaalayste noqday sidduu Marunbaa sheegayo?
Darbi mahadsanid Awow cajaladan ninbaad indhaha kaga tuurtee kkkkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Ali-Durgiye	June 20, 2012 • 14:14	ok Timacadde,
Gaal ba tahay ku odhan maayo oo waa igu dambi ,adna waxaa laga raba in aad kala saarto muslimiinta iyo Islamka.
warkuna wuu dhan yahay.
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 20, 2012 • 14:24	Sahal
Adaa mudan yaa wax ka sheegay Cawaale Aden Ma Runbaa maxuu yidhi bal warka ii bal balaadhi anaa tu kale ku celin doonee yarkaa Marunbaa waa nin Dhagoweyne ah oo bari ay Nuusa Fiin soo caydhiyeen qabiilka dhagoweyne oo lagasoo raray Bus anaga oo Reer Nuur ah ayaa dib u dejin uga samaynay dhulkayaga bariga Dila meel la yidhaa Bus,Lkn hada wuu nagu kibray oo Reer Nuur ayuu mar mar xasardiisa layara dul kambadhuudhsadaa,Adeer miyaad ilawday BAKAAL CADAAWE allaha u naxariistee markii uu Samaroon idinsoo caydhiyay ee dhulka Samaroon dhan ee Samaroon aad weydiin reer ini bariiya RR ayuu dhiigu dhaqaaqay oo dib u dejin u samaysay Bakaal Geedi ayaa ku dhaartay ninka Samaroon ee Dhagoweyne far saara in uu ciidan kusoo weeraridoono,Bakaal Cadaawe oo Ugaaska Samaroonka ee markaa ku ahaa Mucaarid waxaanu wadan jiray ciidan culus.
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 20, 2012 • 14:28	sixid
Dhagoweyne oo ay Muusa Fiin kasoo caydhiyay / rareen galbeedka Awdal no Bus,Bus waa halka uu Bakaal CADAAWE uga sameeyay dib u dejinta oo ilaa maanta ay deganyihiin Dhagoweyne
Reply ↓	Geesi Makahil	June 20, 2012 • 14:35	kkkkkkkkkkkk
Hani hadii ay ka hadlayso Qabiil iyo wax aan dhaamin sacabka ayaad wada tumilahaydeen.Taa badalkeeda waxay ka hadashay wax loo bahanyahay in laga hadlo.Diinta Islaamka iyo dadkii Islaamka sheeganayay oo aan wada socon diintiina u isticmaalay wax ay ku xoogsanadaan.
Shaadhdiimeed ayuu xidhanyahay.Surwaalkiisu waa Cilmaani.Kabahiisu waa qabiil.Wajiga waa ka soomali.Naxdin iyo dadnimo agtiisa ma taalo.Waxasi waaa waxa Somali halkaadhigay ee ilaa maan aan la maarayn.
Hani waxaa ayay ka hadashaye afka ka jeediya.Hadii kale waa Somali iyo caadadiiye,dee caaya oo ilaa qabiileeda socda.
Reply ↓	Sahal	June 20, 2012 • 14:36	Hiildan
su,aal aan jawaab lahayn baad la timid. Anigu ma,ba qabo in ay Soomaalidu leedahay wax xisbi lagu sheegi karo oo mabaadii iyo qorshe siyaasadeed ku salaysan. Waxeenoo dhami waa reer hebel iyaa kaga jira iyo maxay reer hebel u qabanayaan. Su,aashu waxay malaha ku haboonayd in aad “qabiilkee” u dhigtid.
Maantase waxan kaaga fadhinay warkii shirka LOndon ee maanta bilaamay in aad xogwaran nooga soo gudbisid, mise Saylici baa dadka mashquuli ku yidhi oo su,aalo ku wareeri waa sidee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Timacade	June 20, 2012 • 14:47	Ali………waan is fahany, waayo, the only way aan kaga jawaabi karo su’aashaada, waa inaan horta isla meel dhigno, who is Muslim? bil macna, waa inaan parameters ka su’aashaada aan isla meel dhigno, hadii kale labadeenuba waan taraaraxaynaa…kkkkk
Reply ↓	Sahal	June 20, 2012 • 14:58	Darbi Mahadsanid Awoow, ninkan Marunbaa ma,Dhegowaynaa kkkkkkkkk Horta Bus bal iiga waran dhegowayne dib ma ugu soo laabteen dagaaladdii? Mise meelkalaad haddana dejiseen kkkkkkkkk Dee isagoo reer Buseed ah ayuu bad igusoo doontay dabadeedna markaan xuurtu ku yara qabtay ee uu biyaha bada laba goo cantuugay ayuu Cawaale caydii bilaabay ee akhri mawduuca XASAN WADO
Reply ↓	Ali-Durgiye	June 20, 2012 • 15:10	Timacadde,
waa suaal da,weyn waxay u baahan tahay in buuggag laga qoro,cilmi iyo aqoon xeel dheerna diinta islamka loo yeesho taasna ninkan miskiinka ah Durgiye soo qaatay ha ka sugin qof walba isaguu ha is miisaamo halku dhaqanka iyo sharafta islamka ka joogo iyo sidoo intii karaankii ah ugu dhaqmo.
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 20, 2012 • 15:27	Sahal
Waan arkay comment-ka uu leeyahay in Cawaale waysadu ka jabtay xafladii 18 may Attawa lkn garan maayo sababta uu sidaa fanaanka ugu kacsanyahay isagaa ka jawaabi doona.
Odagan Marunbaa waa Dhagoweyne ilaa maantana way deganyihiin Bus oo waa reerka qudha ee BahoSamaroon ku hadhay dhulkooda halka ay Bahabar ADEN,Bahabar CABDALO iyo Bahabar ABOKOR ay dhulkooda ugasoo yaaceen Jibriir ABOKOR lkn Dhagoweyne wali Bus way deganyihiin anagu dhul dambe oo aan dib u dejin uga samayno ma hayno sababtoo ah hada waan badanay oo anagiibaa dhul badan u baahan.
Reply ↓	HaniMuufo	June 20, 2012 • 17:24	Salaan sare dhamaan,
Mahadsanidina inta fahmaysa tuducdaydii xalayto aan qoray. Hadaan u soo laabto su’alaha Mudane Hiildan marka hore waan kaaga mahadcelinayaa xoriyada aad i siisay si aan fikirkayga u gu darsado umadaan walalahay ah.
Labada xisbi ee aan tageeri lahaa labada dhan ee Somalia waa mid gorfayn waydiisanaysa. Taana si shaqsiyan ah ayaan email kuugu soo gudbin.
Hadaan u soo laabto Ali – Durgiye. War Caloow waan kuu mahmaahi ” The stupid might have wanted to help you, but ended up hurting you”. U jeedadaydu waa in aan ka dagalamayo fikradaha noocaaga oo kale ah. Meshan lama joogo suuqi xoolaha ee Wardhiiglay. Anaguna ma nihin wankii adhaxda la tuujinaye kkk. Aduguna waxaan doonaya in aadan noqon dilaalkii uu ka hadlay ( Gabyagii Somaliyeed ee la oran jiray Ismaciil Mire) ee wagii silsilada xaydha iyo sugantii Somaliyeed. Gabaygiisuna wuxuu ka hadlaye dilaale qiyaamay. Isagoon garanayn waxa lacagi tahay. Isagoo wiil aad u dhalin yar ah ayuu dadkii miyiga la joogay ee xoolo dhaqatada ahaa ku war geliyey in uu cisho dhaw u dhadhici doono tuuladii ugu xigtay magaal. Ismaciil Mire ayaa lagu soo xoomay kadibna lagu tageeray in uu aqbaar ka keeno tuulada. Reerna waxay waydiisteen in uu wan wayn saylada u geeyo oo lacag u keeno. Ismaciil kolkuu sayladii xoolaha yimi isaga iyo wankii. Ismaciil wuxu la kulmay dilaal af miinshaar ah. Oo durba fahmay in Ismaciil waligii sayladna iman oo uu yahay inan reer miyi ah lacagtana waxba ka garanayn. Isla markii Dilaalihii ayaa qiyamadiisi ugu cuslayd debeda ula soo baxay!. Oo wankii lacag aad u yar ka siiyay oo aan xitaa koob shaaxa ka badan goyn.
Ismaciil Mire ayaa dib ugu soo laabtay miyigii uu ku nolaa. Reerkiina u geeyay lacagtii kolkaas ayeey caroodheen kuna yirahdeen Ismaciil waa maxay intan yar. Wan wayn intan lagu ma iibshee.
Kadib ayuu gabay tiriyay uu eeda dul saarayo. Dilalkii qiyaamay. Magaciisuna ahaa Af maroojiyii bay qaatalay kii an aaminaye.
Caloow xiligaan lama joogo wagii awoowe yasheen reer miyiga ahayeen oo af maroojiye qatali jiray. Adiga iyo kuwa badana wali waa afmaroojiye yaal dilaalo ah. Oo marna diinta kugu qatalaya marna Qabiilka. Maanta Somaliyi indhehey furtay badankeed. Waxaa u dhashay dhalin taqaan wax walba oo af maroojiye yaasha ka celin doonta. Soona badhigaysa wixii lagu qatalay awoowe yaasheen iyo waalidiinten iyo kuwa weli aquuntu qariibka ku tahay. Waxaan rejeynayaa in aan runta kaa haqab tiray. Hadaad dood sii wadaysana waxba kama qabo. Waxana kugu waninayaa oo aan kugu bisharaynaya in aan ka kornay. Wagii nala dhihi jiray waxaa kuu furan labo wado Tan misa Tan. Hadii kale anaa magac kuu yeeli kkk.
Sheekadaasi waa tii Awdal ka dhacday qarnigii Gumeyste yaasha Otomaan aay jogeen cariga Somalia. Oo aay nin kii la oran jiray Ina Qabiil ama ina Habiil aay soo xidh xidhen markuu warkooga diiday. Kana iibsadeen Boqorkii ruushka. Ninkaas Somaliyeedna tariiqda Ruushka baal dahaba ka galay. Oo uu ahaa nin geesiya oo aay askartooda ku darsadeen. The Black Rushian. Taana bal hala soo baaro shekadaa dad baa igu war geliyay hada kahor.
Adiga iyo aniga waxan ahaan donaa kuwo laysugu dow galay. Ilaa aan meel dhexe isugu nimaano. Hana ka baqin in aad i rifto. Dhabrkaygu waa Sport muruqyaa ka soo jeed jeedo. Sida carmal jilicsan ha iila sheekeysan kkkkk. Anuu waan xamili karaa kaftankaada ee inoo wad sheekada.
Asxaabta sida Gudon, GeesiMakahiil, Godan, Hiildan, Sahal iyo inta kaleba waxba isla waayi mayno.
Sweety Tallman huuno waad dhega nugushahay inan yaroo hada soo korayna watahay, waana kuu ogsoonahay lakin meshani waa heavy battle isku baranayaan kuwii ka habsamay howlohoodi wadani nimo iyo xuquuqdoodi bani aadam nimo. Inaga iyo kuwa naga sii wawayn sida Silaanyo iyo Xasan Daahir ayaa wajaqadan taagan ka masuul ah. Aduu ilmo hada soo koraad tahay nama fahmi kartid greaving ayaan ku jirnaa. Xalkeedana waa in aadan isku mashqulin kolkan wada hadlayno ani iyo kooxdan. Waxbaan isla ognahay oo aanay tariikhda oo kaliya kuu shegi karin oo inagu goob joog ayaan ka ahayn. Waxana nahay qayb adan garanayn oo tariikhdeena ka mid ah. Waxana ku leeyahay is ka daawo uun. Wax badan baad ka baran. Waana kugu tageersanahay siyaasadada ku salaysan Jiritaanka Somaliland.
Reply ↓	Sahal	June 20, 2012 • 17:40	Habaryar Hani,
Hal su,aal ah: Somaalida dhibta soo gaadhay ayaa ka masuul ah ma,kuwa jaahiliinta aha mise kuwa climiga, mid diinya iyo midkale, wax ka bartay?
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 20, 2012 • 18:13	HaniMuufo……Kaama fogi abaayo oo hore ayaan kuugu bixiyay magaca Angelina Joli inaad noqoto gabadh Somaliyeed oo iga barbar dagaalanta hadii lasoo weeraro Somaliland i noqota mar dictorad hadii aan dhaawacmo tosha calooshayda hadii ay rasaastu i kala goyso oo midhicirkayga oo laad laada soo ururisa kuna celisa meeshiisii waxaan doonayaa inaad noqoto gabadh ii baaqda oo codsi SOS iisoo gudbisata hadii lasoo weeraro suuqa Bakaaro iyo beeraha Afgooye ana intoon xidho dirayskayga soona kaxaysto diyaarad xamuul ah oo aan ku wato ciidanka dalaayadaha ku booda oo aan sidii maaiig ilaahay kuusoo diray aan xaga sare kaaga imaado adiga oo ilaahay gacmaha u taagaya oo duco iyo alla bari ku jira in cadawga kusoo weeraray ilaahay kaa qabto aad aragto DarbiSamaroon iyo ciidankiisii oo xaga samada kasoo daadanayo taasi ayaan ku fekerayaa oo aan isleehay Somaliland iyo Somalia ha noqdaan labo wadan oo walaalo ah oo is garab degan oo dhibta iyo dheefta qaybsada adigiina waad igu dumaroobaysaa oo mar aad aniga i caydo tayda waaban iska adkaysan lkn diinta ka daa jees jeeska lkn cida aad is leedahay Somali ayay baabiisay ku nuux nuuxso oo af iyo adinba ku weerar.
Anigu waxaan ahay nin had iyo jeer ku fekera in aan gabdhaha carabta iyo kuwa reer Yuruba aan ka dhaadhiciyo Somaliland iyo Somalia dadka dhaqankooda iyo in Somalidu tahay dad fiican oo waxaan ka fekeraa in gabdhah ajaanibta aan Somalida ahayn ay ku heesaan Af Somaliga sida gabadhan oo kale
sidaasi ayaan gabdho badan oo carab ah u baray af Somaliga oo aan halkan wada deganahay adiguna waad igasii cararaysaa oo waxaad doonaysaa inad dhinac kale iila firxato,Kula yaabi maayo oo qofka dharaartii mas arkaa habeenkii xadhiga dariiq yaala ayuu ka cararaa wan ogahay dhibka soo gaadhay walaalahayaga koonfur Somalia iyo mashaqada ka dhacdayba kherbaan kuu rejaynayaa abaayo is deji oo aan isla eegno dhibka meesha ay inagasoo gashay iyo halka ay dabaysha dhaxanta badan inoogasoo galayso.
Reply ↓	DarbiSamaroon	June 20, 2012 • 18:13	Reply ↓	Sahal	June 20, 2012 • 18:21	Hiildan Dee warkeeni waydaya waakan ee bal ila eeg sida adeerkaa ana abtigey karaamada looga qaadayo ee la leeyahay “cidkasta warku inuu gaadhoo maaha” kkkkkkkk oo madaxweyne ku xiggeenku ma,cidkastaa? http://www.voanews.com/somali/…/London-Shirkii-...
Reply ↓	Sahal	June 20, 2012 • 18:32	Hiildan markaan isku dayey http://www.voanews.com/somali/news/London-Shirkii-Somalia-iyo-Somaliland-oo-Bilaabmay-159712505.html
Reply ↓	Haboon	June 20, 2012 • 18:54	Sahal,
Ninku wuu kala hadlaa, wuxuu yidhi mar shir looma wada uunsiyo oo cid walba looma sheegi karo, marna waa la isku raacay oo dadka waa loo soo badhigay oo majority way ogolaadeen, bal adba,
Reply ↓	Tallman	June 20, 2012 • 23:16	Mr.Timacade wa’alikum Wasalam hadii aad Muslim tahay.Subaxdii waan shaqeeyaa oo saasaan ula raagey jawaabtaada.Horta ma wanaagsana in indho la aan aad ku difaacdo Hani.Hadii aad si fiican u akhridey ”comments”ka aan qoray waxa aan ku macnaynayey in Ninka ama Gabadha Islamka ah ay wax xadi karto,sinaysan karto,qof dili karo,bank dhici karto etc.Taas macnaheeda maaha in qofkaasi yahay”Innocent” ama loo baneeyey waxyaabahaas.Dabcan waa laga goynayaa,dambi kastaana ciqaabtiisa ayuu wataa.Anyway,waxa aan ka wadey waxa ay aheyd in aan lagu tilmaami karin”Gaal” ama”A Non Muslim”.Dadka waxa aad weydiisey su’aasha ah What is Islam! Waa cajiib in niman waaweyn aad weydiiso hadaan kaaga jawaabana,Islam is the religion of the Muslims,a monotheistic faith that Allah revealed through Prophet Muhammad(P.B.U.H).Hadaad macnaheeda doonaysana”Islam is derived from the Arabic root”Salem”oo macnayaasha soo hoos galayana ay ku jiraan Peace,Purity,Submission and Obedience.
Reply ↓	Tallman	June 20, 2012 • 23:32	Waxa kale oo aad soo qaadey Abdillahi Yusuf,General Aidid,kuna dar kuwan Siad Barre,Mu’amar Alghadafi,Iddi Amen and many more,Of course dad bay xasuuqeen weyna helayaan abaalkooda laakiin ma odhan karno Muslims maaha.Ilaahay dambiyada ay gaysteen wuu ka siinayaa jawaabteeda,laakiin still waa Muslimiin.Mida kale Ilaahey cidna kalama tashanayo qofka uu Hell or Paradise uu galinayo.Ninkan aad leedahay Downtownka magaaladeyda ayuu masaakiinta cunto ku siiyaa waa arin wanaagsan,xasanaadkana aduunkaa lagu siinayaa,laakiin hadii uu ”Reject” ku sameeyo Allah and Prophet Muhammad waxa ka sharaf badan Homelesska Islamka ah ee hurda suuqyada Indonesia.@Hani why aad”age” ama inta sano ee qofka uu jiro aad ugu carartaa marka su’aal lagu weydiiyo.Waxa jira madax badan oo aduunka caan ka ah kaana age yar ee huuno su’aalihii aan ku weydiiyey ka jawaab,hana isku dayin in aad soo qorto Janaan bililaqaysanayaa iyo waxaas again Joke ma gasho arimahaas,diintana waad kaga bixi kartaa adoon ogeyn.Finally Topicga yaan la leexin.
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 00:04	Mr. Tallman……Waad mahadsantahay Jawaabtaada, dee definitions iskuma diidanin oo dee intaa aad sheegtay iyo in ka badanba waan ka aqaan islaamka. Su’aashaydu waxay khusaysaa dadka aan u hogaansanyn waxyaabaha ay diinta islaamku farto, lakiin muslim baan nahay yidhaahdaa, really miyey yihiin Muslim. Anigu waxan qabaa dadka noocaas ahi inaany muslimba ahayn. Adiguba sida aad sheegtay, islam is about purity, submission, obedience, Dee qofka teachings of islam wax kasoo horjeeda sameeya, not once but repeatedly, siduu muslim ku noqon karaa. Siduuse qofkaasi qof kale oo lagaba yaaba inuu ka camal fiicanyahy u question garayn karaa inuu Muslim yahay.
Let me give you another example. Somalidu hadday arkaan nin ‘ Gay” ah dee uma malaynayo inay ka gabanayaan inay yidhaahdaan qofkaasi muslim maaha oo markaaba nacdal bay dusha uga ridayaan, xitaa haddii uu qofkaasi ashahanayo, islam na uu sheeganayo. Sababtu waxa weeyi qofkaasi camalka uu samaynayaa waxu lidi ku yahay teachings ka diinta. Dee sidoo kale qofka fidnoola ah ee ficiladiisu ay dhaliyaan inay umad isku diraan, miyaanay ahayn inaan nacdal dusha kaga tuurno, oo aan cadayno inaanu qofkaasi muslim ahayn, ilayn teachings islaamka wax aad uga soo horjeeda ayuu qofkaasi ku kacaye. U fiirso, fidnadu, maaha bilaa victim, dadbaa wax ku noqda oo u dhibaatooda down the line. Markaa dadkeenu badankood xitaa xaq uma laha inay qof weydiiyaan inuu muslim yahay, waayo iyaguba waxay u badantahay inaanay muslim ahayn, lakiin ay u haystaan inay muslim yiin, madaama ay salaada tukadaan, somaan, zako bixiyaan. Islam is a way of life and if you fail to live like a muslim person, then you are not a Muslim. So, I vehemently believe that most somalis are not Muslims.
Reply ↓	Isaq Boy	June 21, 2012 • 01:29	Dad aan u haystay inay wax kala garanayaan uun baan arkayaa iyagoo fakir ahaan sii siqiiraya maalinba maalinta ka danbaysa.. oo muujinaya inay biyaha dushooda sabaynayaan.. oon laguba ogayn wax xikamad iyo maskax tuujina haba yaraatee..
Afar maqaal oy qoreen qaar aan ilaahay aaminsanayn ama Shayaadiinta Insigu hadaad soo cabto siday yihiin ood is moodo inaad wax ka taqaan Philosophy-ga iyo Theology-ga waa mid musiibo ah..
Hadii la isku qaldo laba arimood oo kala fog iskuna jira intay bariga iyo galbeedka Universe-ku isku jiraan waa mashaakil.
Nabigu wuxuu ku tilmaamay – Calayhi Salaatu Wasaalem- qofka muslinka ah in uu yahay: “qofka ay carabkiisa iyo adinkiisa muslimiinta kale ka nabad galaan” diinta islaamkana wuxuu ku tilmaamay inay tahay “Hab-dhaqan” oo taasi ma aha wax lagu doodo waana waadix iyo wax common sense ah.. waxaana ka horeeya wax walba inuu qofku ilaahnimo u qiro ILAAHA kalida ah ee awooda iyo Xikmada wayn.. iyo inuu Maxamed yahay Rasuulkii ilaahay..
laakiin in ilaahay lagu tilmaamo inuu si dulmi ah umada u kala xukumayo markay aakhiro isaga hor taagan yihiin iyo in janada lagu galayo qabyaalad.. iyo in Malaai’gta lagu dheeldheelaa waa Khatar waanan ku celinayaa mar labaad waa Khatar Wayn walaahi iyo waliba Gaalnimo
Ilaahayna wuu ka nasahan yahay kana wayn yahay kana sareeyaa aflagaadada Shayaadiinta Insiga..
Ee yaanay kubad idin hor dhigin qof aan la garanayn wax alaale iyo wax ay tahay oonay ilaahiina idin seejinin iyo aakhiradiina ee HALKAA KAGA HADHA….
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 02:42	ISaaq Boy…….KKKKKKKKKKK Saxiib ma waxaad u haysataa inaan malcaamad ku jiro oo aan wa shamsi waduxaa in laygu sameeyo aan ka baqayo. Dee come on Isaaq Boy, wixii aan qoray iyo waxa aad leedahay way is waafaqsanyihiin, yet, waad ii cagajuglaynaysaa, xaalku waa sidee. Islam is a way of life and you agree. Qof muslimka ah waa in carabkiisa iyo adinkiisa ay muslimiinta kale ka nabad galaan, I agree, in fact you prove my point. 2 ilaa seddex milyan oo somali ah ayaa gaajo iyo dagaal ku dhintay somalia in the last 20 years. Cid dibada inooga timidi ma jirto ee waa somali muslim sheeganaya dadka xasuuqaa ka dambeeyey. Marka dadka waxaa oo dhan ka dambeeyey ee walina hurinya colaad iyo munaafaqad dagaalka sokeeye, siday qof u weydiin karaan inuu muslim yahay iyo in kale, ilayn isagiibaaba tiicayee.
Anigu kamaba helo in aan diimaha ka hadlo, mana aha wax aan agenda ka leeyahay, lakiin waa wax aan aqoon iigu filan u leeyahay oo aanan cidna inay iiga turjumaanto aanan u baahnayn.
Reply ↓	HaniMuufo	June 21, 2012 • 02:56	Tallman,
Su’alahada waxan kaga jawaabi markaad iiga jawaabto ana su’alahayga. Aduunyadan wax adanuhu isu quuro ma jiraan. Waxay donaan iyo diintey donaanba ha sheegtane, hadii aan lotery helo dad badan oo ayaa ka naxayo, lakin hal shaay ayeey muslimka ama islamku leeyihiin oo aay kugu dilayaan xitaa hadaad ka diido in aad aado kkkkkkkkkk. Waana shayga aay ugu jecelyihiin noono shegeen in aan meel lagu doorsado jarin magaceeduna waxaa la yirahdaa Janada madama aan aduunka si wanagsan u dersay oo aan garanayo adanaha iyo dabeecadihiisa. Hal su’aal ayaan ku waydiinaa. Maxaa janada laysugu qasbaa oo laguu qurgoyn hadaad tiraahdo jano ma rabo iyadoo aan wada ognahay in aan selfish nahay oo aanan waxba isu quurin. Maxaa sababay in wax aan weligeed qof soo arkay jirin in la gu maqlo sheeko mogiye laysugu dilaa laysugu dhedhejiyaa loo kala sheegtaa. Anuu wax walba aan ahado lakin illusion ka dad badn ku qunfulan anuu ma lihi. Soo daa warka ayaan taganahay. Teeda labaad waxan ahay wax kaa galay ma jiro ruux qangaar ah ayaan ahay oo adan waliga film ka daawan. Somaliduna waxay ku mahmahdaa Fiqi ayaa nin waanshay naftiisuna ma waansana. Xitaa hadaan Gaal ahay waa mid ani i quseysa. Adna waxaad tahay waa mid ku quseysa. Taada ka bax!. Tan labaad da’da aan kuu yareeyo marwalba waxaa kalifay in aan marar badan ku arkay adoo dad ku xuubsanaya oo leh habar yahay iyo duq baad tahay cimri ah kkkkkkkkkkk. Aniga weli ima baran lakin ruux walbo waxan ku sadaqaystaa wuxuu jecelyahay anoo u abuurayo farxad yar oo temprery ah. Si aan u kala nabad galno. Lakin hadii qofku iga bad badsho waxaan awoodu uma kala reebto.
Reply ↓	Marunbaa	June 21, 2012 • 03:02	Waar ilayn dhibiba waa dad aan wax fahmay oon critical thinking ku ka maqan yahay dood hakula galaan. Sahal you are so tunnel visioned with peny brain I gues. Dumis Samaroon, Dhega wayne ma ihi balse aad baan ugu hanwaynahay in aan tol la noqdo doqonimadaada oo kalena marlay meel iima soo marin. Isaq Boy, Hanimuufo, Tallman iyo Tima cade, hoos waxa ku qoran comments aan ka bixiyey fanaanka Xasan Wado waxanse ku soo daray fanaan la yidhaa Cawaale oon is garab dhigay wadada uu ku taagan yahay iyo sida uu ahaan jiray balse ayna isaga u gaar ahayn u jeedadu ee ay habdhaqanka fanaaniinta somalida ee hada ay khusayso. Bal waaniga hoos ku soo qoray qoraalka aan meesha ku qoray ee Sahal ku doodayo in aan qabiil ahaan uga soo horjeedo, Fadlan read it and give your view because I’m willing to take the bull by the horn if my comments have any tedency or inclination towards triblism. Mind you I believe Awale used to be an icon singer but he is on his way to somai arts graveyard like any other somali singer in the west and they is my dear view about him. Nothing more nothing less.
Here is the comments and you can also read from the original about Hasan Wado on this site. Fanaanka qaaliga ah dacaayada iyo cayda halaga daayo. Xasan wado waa reer Boorama, Gabiley, Djibouti, hargaysa laas caanood, mudug iyo meel walba markaa uma qalmo nin qabiil lagu tirin karo. Hasan Wado, hadaad meesha soo gasho waxad tahay fanaan aad loo qiimeeyo markaa ninkii cawaalay waysadu Toronto kaga jabtee saaxiib aroos iyo meel caruuri iskugu timaado oon sharafta fanaan nimo la dhawrayn haysku iman, yayna qolo iyo qabiilna casuumad beena caadha kuu galin. Intaasi waa iga talo sobob too ah talaxumada fanaaniinta somalidaan usoo joogay.
Reply ↓	Tallman	June 21, 2012 • 03:17	Mr.Timacade,ama jecloow in aad diinta ka hadasho ama necboow,ana ama aan jeclaado in(Islamic Lectures) aan soo jeediyo ama aan necbaado,2deenaba waan ku khasbanahay in aan Islamka barano,hadii 2deena mid ka mida uu Islamka kaga fiicanyahay ka kalana uu”Surender” sameeyo,marka uu argumentku fogaado ama weydiiyo qof ka cilmi wanaagsan.Tusaale ahaan Wdeenaba ”Physics ama Math” waan ka wada haysan karnaa”Enough Knowledge”,laakiin awood uma lihin in aan la muranno Mathematician jooga Canada or America,tan aan ka hadlaynaana waa same.Hadith buu nabigu ku yidhi”Whoever says there is no God but Allah and Muhammad is the Messenger of God is going to Paradise”.Its an authentic hadith and its in Bukhari and Muslim.Macnaha Hadithkaas waa Muslim baa jira Khamriga cabba,Mid dadka dhaca,mid naagaha not only”Premarital Sex”laakiin kufsada or”Rape”,mid nafta ka qaada”Prisoners of War”,mid noqda markhaati beenaale,etc mid aan tukanba,soomina laakiin mar kasta ku leh”I am a Muslim’.
Reply ↓	Tallman	June 21, 2012 • 03:25	Kuwaas oo kale”Infact” waa ay galayaan naarta,qabrigana waa lagu cadaabayaa may be 1000 years of hell.50,000 oo Sano oo inta aan sanad u naqaano oo ka kooban 12months sanadkiiba waa just 1year oo ah inta Ilaahey sanad u ah.Marka 2aad Hani says”Janada maaha cadaalad ana xoog baan ku gali doonaa oo Xuural Caynta waa cadaan uun!” ma ku raacdey Yes or No! Jawaab baan kaa sugayaa Mr.Timacade.
Reply ↓	Marunbaa	June 21, 2012 • 03:27	Tallman, waad igu ogtahay in aan shaabuugeeyo, balse adiga kaama qabato in aad qayb kaa mida cay iyo nuxus nimo la raadsato sida ninka abtibaa la iiyahay cayda title ka uga soo dhigta. Waxase iga yaabisay, ninka leh Agabar baan adhiraac ka ahaa balse aabahayna inan la yaal ma ahayn leh.
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 05:02	Tallman……Anigu ma yaraysto doodaha sidan oo kale ah, inkastoo aan waxoogaa ka aqqn diinta igu filan, haddana caawa waxan raadsaday sheikh aniga iga gadhweyn si aan u hyubsado inaanan taraarixin. Waa runtaa hadithka aad sheegtay Nabigeenu ( PBUH) wuu yidhi sidaa, waana xadiis saxiix ah. Diinta Islaamkuna waan la socdaa inay sarayso threshold ka ay u dhigtay inuu qofka ku kufriyi karo. Waxyaabaha lagu kufriyaa waxay u badanyihiin waxyaabaha beleive ka ku saabsan. Sida inaad tidhaahdo ma rumaysni ilahay, ama aad question garayso awooda ilaahay. lakiin danbiyada kale ee lagu kufriyaa waxay yihiin kuwo intentionska qofka khuseeya. For instance, haddi aad dambi gasho, adiga oo xiskaaga qaba oo ogi inaad ilaahay waxuu ku faray aad kasoo horjeesanayo, oo aad falkii ku celceliso, dee markaa waxa la odhan karaa at some point, teachingkii ilaahay waad diiday. Meaning waxad isku qancisay inaad dafirto farrintii ilaahay. dee markaa non believer baad tahay. Waana sidaa sababta ay dad badan aanay muslim u ahayn, waayo believe koodii ayaa ” erode” garoobaya, to an extent ay noqoto diidmo amarkii ilaahy, hence, qofkaasi waa non muslim.
Hannimuufo hadalkeedu sarbeeb buu ahaa dee hadaad literal reading u qadateen waad khaldantihiin. Waxay isku dayday inay mirror idin hor dhigto oo ay idin tusto, islaanimadu inay ka balaadhantahay madaxa dhulka la saaro. Dee maxaa xura caytu ay u cadaan u tahay waa suaal valid ah, anigu haddaan jannada u shaqaysto, kama helo cadaanka ee waxaan rabaa xural cayn madow……Dee Ilaahay wuu awooda inuu madowna meesha geeyo, hannimuufano, preferencekeedii ayyunbay ilaahay si dadban ugu sheegatay, wax ku jabana ma arko.
Reply ↓	Tallman	June 21, 2012 • 05:12	Lol@ Marunbaa,horaan kuugu sheegay,hadii Galbeedi uu Samaroon wax ka sheego dee waan wada karbaashaynaa,hadii Sahal ama Cali Durkiye ay ku daydaan Galbeedi dee sxb horaan kuugu sheegoo aniga ma caayi karo 2 Reer.Hooyadey oo ah MAMAASAN IYO AYEYDEY OO AH REER KUUL,MARKAA ADAAN KUU DAAYEY,LAAKIIN HADII AY SII FOGAADAAN 2DAA REER HADII AANEY AHEYN SAHAL AND CALI DURKIYE WAAN U YARA HOOSAASIN KARAA,LAAKIIN HAYGA FILAN IN SIDA DARBI AAN DHABARKA KAA TOOGTO.
Reply ↓	Tallman	June 21, 2012 • 05:43	Timacadde waan kugu raacey all except”Your Conclusion”.Brotha,axaadiista may sheegin colorka xuural caynta,laakiin waxa aad jeceshahy ilaahay wuu ogyahay,soo uma baahna in Allah uu ku weydiiyo”Your Preference”,because wuu ogyahay.Waxa aad ka leexleexanayso Timacadde waa,Hani waxa ay tidhi”Janada waxa lagu galaa qabyaalad,xuuralcayntana waa wada Cadaan,markaa hadii Cadaabta la i galiyo waxa aan xoog ku soo galayaa Janada oo aan cuntada ka boobayaa dadka Janada ku jira!” ma sameyn karto xitaa in ay ”The Angel of Death”ay waydiisato 1second oo ay hawl ku soo qabsato,laakiin honestly waxa uu yidhi Prophet Muhammad,hadii aad aragtaan qof khaldan,aniga i caayaya ama muran dambi ah samaynaya gacantiina wax kaga qabta,hadii aanad awood u laheyn afka ka dhaleecee,hadii even ay taasi dhib keenayso niyadda ka nac and that is the weakest iman” aniga Ayan Hirsi waxa igala daranba this woman.Waana in aan ka hadlaa cause even Aabahay iyo Hooyadey waxa aan ka jeclahey Prophet Muhammad,mana ihi Religious Man.
Reply ↓	Sahal	June 21, 2012 • 05:45	Marunbaa
Daciifnimada intood iska daysid nin rag ah ayuu ILLAAHAY kaa dhigee su,aasha ku hortaal ka jawaab: Ciise meesha hadduuna oolin ragga ayaa laayay? ma,reerkii jeeska ahaa ee reer Aare mise dabadaabuu Ciise dhulkan soo degay?
Dooda Xasan Wado iyo Cawaalana adiga uunbaa meesha layimiday ee waan kaaga jawaabi doona lkn oodi siday u kala saraysaa lookala guraaye ee dooda hore meel aan isla dhigno.
Mida kale bal hal eray oo cay ah oo aan Gadabuursi ku duraya kasoo dhexsaar dooda aan kugula jiro oo tus Tallman?
Come on, Marunbaa, il y a longtemps que je vous ai dit ” arrête de pleurnicher, ici, tu es dans la cour des grands”.
Reply ↓	Sahal	June 21, 2012 • 06:07	Tallman
Abti, cayda uunbaa inaga reeban lkn dooda waad ka qayb gali kartaa oo aad Ciise iyo Cusboyahanba waaq kaga yara siin kartaa and ” I will be proud of you” lkn waligaa doodaada run iyo xaqqiiqo ku salee haddii kale sida ninkan Marunbaa baad dhooqo aad dhax fadhiisan dabadeedna “abti meel xun laga raac” ayay dadku odhan doonaan oo ana ceeb baad iisoo jiidi doontaa kkkkkkkkkkk
Reply ↓	HaniMuufo	June 21, 2012 • 06:57	Waryahee Tallman,
Waxba haygu mashquulin kkkkkkkk. Marka carab hadlo inan gumeedkii ayaad tahay iyaga ayaana sheegayo. Bal dhegeyso filimkan!. Tallman nin baqaya oo shiciradu gariiraysaad tahay. Anuu cid aan ka baqayo ma jirto mana u booteeyo dadka walalahay ah mana bah dilo iyagoon iga kasban. B iyo T toona ma tihide orodoo naftaada jeclow. Marwalba waxad ku fantaa in aad walaladaa u dharato ood tiraahdo waan idin raadsan lolz. Waa maxay diintaad leedahay waryaa hee ma lagu baray in dhiiga sukeeye hadaad gasho aduun iyo aaqiradan ba aayan waxna kuu oolin?.
War hadii la dhimanayana dhareerka waa layska duwaa Tallman. Aduu haygu mashquuline bal sow ma tihid ninkaan iska garanayo oo dumarka hooyadii la fila ama da’di ka yarayda cayda ugu qubeeya?. I dhegeyso aniga ilahay igama xigtid waxana iniigu soo dhigay fikradahayga in aan idinka qanaasay. Waryaa aduu qabiilka ayaad caabudaa waana la socdaa waxaad qor qorto. Lakin waxaa igu balana buug mug wayn in aan iniga qoro. Afmaroojiyayaasha dhan een ku arkay dunidan. War anuu dilaal uma baahni Qabiilada iyo Diinta ii fasira Anuu waan fahmi karaa waxa dhan ee aad qasaysaan. Kadibna iska dhigaysaan kuwo diinleh. Waa danahaaga iyo Howlaha maraakiibta hadaad Hooyadaa iyo Aabahaa ka jeceshahay N. Mohamad. Anuu Hooyadaay iyo Aabahay iyagaan dunida u jeclahay ruuxna ku doorsan maayo. Anuu carabti diinta la lugaynaysay ayaan aad u dhegeystaa waxa aay shegaan Sheekhyadoodu. Somalida anuu uma arko dad ii sheegi kara diin. Kuwii u keenay ayaa gari iila taale war iga fariiso xiin faniin baad tahay iyo jar iska xoor yar. Hadii lagu yiraahdo qofkaa soo dil diinti ayuu diidaye waa siyaasad ku salaysan in carabku lacagtuu ka guranayo xajka aanay ka kala nusqaamin. Ilahay wuxuu yir lakum diinakum waliiyu diina. Ilaahay isagaa la xisabtamaya ruuxi ku caasiya. Carabtuna waxay ka baqaysaa in aay karaamo dhacdo. Waxay bixisaa lacago badan oo dadka sare u kacay ee fikirkoogu sareeyo aay ugaadhsadaan dunida dacaladeeda. Inta kale ee sida adiga oo kale ahna ka gurtaan lacagta mana cabudaan ilahay ee carabtaad caabudaan. Hadad i tiraahdo ruuxi diinta diida waa la dili. Ogoow in aan anaguna ku mashquulsanahay sidaan dhidibada ugu siibi lahayn kuwa maskaxda kaa haysto. Indhahaagana waad ku aragtaa heerka aay gaarsiisan yihiin. Anoo muslim ah hadana war agenst Terror and extreem Islam qayb libaax ayaan ka qataa. Waayo anuu gun carbeed mahiye shaqsiyad iyo xuquuq baan leeyahay. Ruuxi igu soo fara geliyana duntiisa ayaan fur furi waa igu walah oo bilah xitaa haduu igu dul baroorto oo xayuumey iyo qayuumay igu aqriyo.
Reply ↓	HaniMuufo	June 21, 2012 • 08:36	Tallman raga kuu shegaya in aad disho ruuxi diinta ka soo horjeesta meesha ay ugu dambayn kula gaari donaan ila daawo. Waxaan hubaa xitaa Alshabaabka in sidan xaalkoodu yahay. Oo xoog lagu haysto inta la daquulay. Madaxda Alshabaab waa hore ayaan ku riyooday oo hurdada la iiga kacshay in xaalkoogu sidan yahay. Amarada la siinayahina aay ku qasban yihiin. Intaad nin raga iska dhigto xoriyadaada haku badalen sidan!. Waayo aan u iri janaduba waa afaare qabiil Araweelo waa naagta xoriyadiina inii shoo dhicin karta ka daa kadeedka iyo ka daba qadashada wax bay ogtahaye kkkkk.
Reply ↓	Sahal	June 21, 2012 • 09:23	Hani
su,aalbaan shalay ku su,aalay kamana aad jawaabin ee haddana waxan ku su,aalay dhibaata soomaalida haysata ma, waxad u aragtaa in diinta Islaamka dhinaceega kaga timid? Miyayna diinta Islamka iyo muslimiintu laba kala ahayn? Waxkastaaba wuxuu, siday aniga ila tahay, ku fiicanyahay in mowqif dhexdhexaadnimo la,iska istaago. Haddii wadaad mayal adag cilmaani mayal adag lagu badilo ma,kula tahay in xal soomaaliyeed keeni karto?
Reply ↓	amiira	June 21, 2012 • 09:53	Bismilaahirahmaaniraxiin haniyeey abaayo macaan istaafuruleso walaalo diinta wax comment yar lagu falaqayn karo maaha, carabina diinta islaanka inagama xigto umana daba fadhiisanayno,waayo anagu maqal baan ku muslinay iyagana dhagaxiyo seefbay ku muslimeen,qaarxun iyo qaar fiicana waaleehay muslimkuye ilaabaana dadka xisaabine walaaloha ku dheeran mawduuca diinta
Reply ↓	HaniMuufo	June 21, 2012 • 10:23	SAHAL KKKK,
Habo waad iga qoslisaye ka waran waxaan kugu jecelahay daacad nimada.Hada habo cilamaniyad mayal adag ayaad ku sharciyeysaye kawaran!. Dee anuu cilmani na maahi wadaad mayal adagna ma ogoli. Oo ninka soo biilayaahi wakaa cunsurkaa qaniiska ah.
Anuu waxan ku doodi uun meeday anagu dadnimadaan lahayn iyo gobanimadi la inagu yaqiin. Ma waxan ku bedelanaa gun nimo iyo in aan qaniisyo inagoo dadkeenii si fool xun hagaaasku uga muuqdo. War inagu aan go’aan gaadhno. Maxaa nagu daba safay waxaanan inagu lahayn?. Diintase waligeed baa la cabudi jiraye maxay tahay dadkan mintidaya ee dhaqankan baas ee sucudiyaanka noo sido. Hade waxa lagu hadaaqayo anuu diin uma aqaan. Waa dhaqan carbeed. Diintu waa kuwii awoowe yaasheen caabudi jireen. Waligeyna tariikhda kuma maqal sheekadan cusubee Somalia ka socota. Hade umaduna inteey af labadii waaxatay ku leedahay xaadiis ebel iyo xadiis eblaayo ayaa yidhi. Huuno anuu waa la yidhi iyo waa la xarantinimeye aqbali maayee. Halay tusu dad waxan la yir yiri uun xumaanta ka soo urursanee xitaa wanagana ka qaata. Maxay kula tahay niman raga oo inan yar oo sabiyah oo la kufsaday dhagax ku dilaya. Ilma diif tu ka muuqata aadan daawan karina arena laysugu keenay oo aay dawanayaan?.
Kuwa wax dhagax ku dilayaahi miyeynaan awoodin in aay dadka degmada wax wanagsan u sameeyaan oo aay baraan dadka wixi wanaagsan. Sida aqoonta, wax sosarka, cafimaadka, farsamada gacanta. Dee ma yeelayaane waay uun isku jihadayaan ubadkoogina dhagaxyey ku dilayaan. Biilkoogana Sucuudiga ayaa soo xawila!. Aduu makula tahay in Sucudi iyo xitaa gaal ba ku rabaan? Mid walbaahi dantiisu u ordayaa. Sucuudiga waxaa u daran in uu kaliya hablahaga ku raaxaysto sex torist gaalkaa cilmaniga ahna macdanta dhulkaga ka qoto!. Inagu meeday danteeni?. Ileen af wax cunay xishooye. Wixi aan caydh Sucudi ka cunay Cilmanina ka cunay ma in naloo cafinayaad moodaa?. Daawo filimkan danta Sucuudi mustaqbalka naga leeyahay tan Cilmanina waan kuugu xijin.
Reply ↓	Sahal	June 21, 2012 • 10:59	Hani
Bil cagsi aniga waad iga yaabisay HABO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cilaamaaniyad mayal ada matid oo waa runtaa lkn camalkooda ayaad leedahay ee horta Allah ka cabso oo isdaji. Maxaa isku xidhay carabta iyo diinta islaamka ? Maxaa isku xidhay diinta suuban ee Islaamka, ee iyaddu gacmo iyo indho lahayn, iyo muslimiinta aadami ah oo gaf-faf badan ka dhacaan?
Carabtu waa dad fiican malihi oo waan oganahay waxay yihiin lkn diinta iyagu malaha, mise?
Dhibaatada Soomalida haysataana waa mid ay cilmaaniyuuntu abuureeen sida Africa, dunida carabta …..inteedda kaleba. Soomalida intii wax soo baratay ayaa si xun u isticmaalay dadkoodii iyagoo reer hebalow durmaan la yidhaahdo garaacaya. taasi miyaad inkiri kartaa? Dabadeedna 20 sanadood ka dib waxaa soobaxay qolo cilmi diiniya leh, qaar cilmaaniyiin ahaan jireyna ay dhex raaceen, oo doonaya magaca diinta in ay tallada ku maroorsadaan. Kuwiina waxa ka daba yimid qolo qolo aan waxay doonayaan xataa iyagu garanayn.
Isku soo wada duuduuboo dhibta ma diintaa abuurtay mise qolo cilmaaniyiin ah? Soomaliddu waligeed ba jaahilbay ahayd sidana iskuma gali jirin ee jaahilintii geedaha hoos fadhiyey wax soomaali uga roona ma,jirin
Anigu waxan aamisanahay in nacaybka diinta Islaamka iyo ku jees-jeeskeedu ahayn dariiqa kaliya ee xal soomaaliyeed lagu hanan karo.
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 12:32	Sahal iyo Dhamaan,
Waar nimanyahow, noloshu wax micno ah oo leedahay ma jirto haddii aanu qofku every now and then aanu self introspection isku samyn waxa uu samaynayo iyo waxyaabaha ka dhacaya agagaarkiisa. Hannimuufo waxay iclaamisay in dadka ku qadhaabanaya magac dineed ee Somalia iyo carabta ayna diin sax ah haysan. Dee ninka u haysta inuu ku janno tegayo inuu dilo gabadh yar oo gardaro lagu violate gareeyey gabadhnimadeedii miyaanu ahayn nin xoog janno raba inuu ku galo. Dee kaas uunbay Hannimuufo ” Microscope” dul dhigtay si ay idiin tusto in waxyaabahay dadka qaarkii sameeyaani inay diinta islaanimada kaa saarayso. Ninka teachings ilaahay si ula kas ah u caasiyaa again aand again, waa qof ilaahay jiritaankiisa dafiray, waana kaafir. it is as simple as that. Qofka Somaliga ah ee si ula kas ah u sameeya fidnooyin aafo u keena umad badan oo muslimiin ah, oo ku celceliya falkii dee waa qof yidhi message kii ilaahay waxba kama jiraan, therefore, jiritaankii ilaahay buu question gareeyey, waana kaafir. Dabcan way jiri karaan xaalado uu qofka sameeyo oo badan oo ka baxsan diinta oo aanu ku gaaloobi karini, lakiin, wixii shiki galiya jiritaanka ilaahay, waa lagu kufriyaa. Godane iyo Alshabaab, waxay day in and day out sameeyaan falal ku lidi ah diinta islaamka si ay ugu ijtihaadaan Janno inay galaan. Dee xagay jannadu uga iman haddii aad dafirtay ilaahay waxuu ku faray, ilayn markaa maba tihid muslim e.
Reply ↓	HaniMuufo	June 21, 2012 • 14:46	Timacadoow simpele waxa dad badan oo Muslim ahi aay diidan yihiin in aad tusto qaladka lagu jiro. Wax jeneral problems u ah dhamaantood ayeey iyagoo og personal atack u fasiranayaa iyo in qasrigoogi loogu soo galay waxayna kuu gelayaan aag. Inteey farxi lahayeen oo aay positief feedback gi aad u soo bandhigtay ka faiideysan lahayeen. Oo aay kuwooda qaldan iska qaban lahayen ruuxi wanaagooga waday ayeey comunety gi ka saarayaan kuna shabadaynayaan in uu jiritaankooga ka soo hor jeedo!. Sipele kadib hayinti ayaa isku soo haraysa. Anuu waxaan galidey isu xilsaaray in aan soo helo sababta kaliftay arintan!. Kolkaan baritankeygas ku guuleysto isagoo free ah afaf kala duwana ku daabacan ayaa google ruuxii doonahi ka downloed graysan donaa si xoriyad ah!. Anuu waxaan ku mashquulsanahay wax hanti ah oo iga soo galaysaahi ma jirto. Lakin waxaa ii muhiim ah. In dad badani illucion ka aay dhex jibaaxayaan uusan no longer can play it periorety. Anuu Ilaheey wuxuu marqaati iiga dhigay wagi Ayaan la er eryan jiray in rag Turki iyo Marocan ahi shaciyeen in aay qudh goyn donaan!. Isla galabtaa ciidamo is qafulay oo dhar madmadoow xidhan ayaa Magaalo ka mid ah kuwa Holland u dhacay Turkish thea huis. Waxay pasment gii dhismahaas raga islamka ahi ku qaxwaysan jireen kolkey masjidka ka soo labtaan ka soo sareen Hablo iligal ah oo dhalashadoodu Nigerians tahay oo meshaa ku xabsiyeysan sex slavers ah!. Anuu kolkii breaking news kaa aan arkay. Dhulkaa ila wareegay I was realy deeply shock it. Waxana ii sawirantay in dadkan diinta difaacayaahi aanay no longer xaqba u lahayn in aay xitaa yirahdaan waan caabudnaa ama inagaa xili naga saranyahay!. Becouse they laying them theeths. Waxayna u adeegsanayaan diinta as war instrument to benefit them selfishness and self pity. SAHAL,
Habo hayla yaabin anuu waan ka dhii dhiiyey in aan dharaar walbo been qayaxan iyo dano gaar ah u arko wax ani i quseeya oo aan digaaco waxan duxi igaracayn.
Imikaan bal isku dayi in aan kaga jawaabo suaalahagi
Huuno dadka umiga ah ee reer miyiga ah waxa is ticmaalayaahi waa Dilaale yaal afmishaaro ah oo badankoogu aqooni ku yarayn ama waya aragnimo taana waaxa aan ka dagalamayo ayeey kow ka tahay. Dilaale yaashani marn Qabiil bay dadka ku ololeyaan marna Diin lakin waxba ma dhamaan kuwan aan kur ku sheegay. Ee Hablaha danyartaahi ugu xabisnayeen dhulka hoostiisa oo markay soo dhrgaan ku dhereg dhacsan jiray!. Arintu si kastaba ha ahatee waan ogahay in aad aduu tahay shaqsi diinta muslimka si dhab ah u caabuda laakin kuwa u ololeeyo ayaan la dirirsanahay. Hadana bahdila oo aan xitaa caabudin. Hadii baaritaan ku yimadona dembiyo diinta iyo bani’adam nimada ka baxsan lagu helayo isla markiiba. Aad baana uga xumahay in badankood kuwa leh diintaan damanad qaaday cidii ka hadashana waan qudh goyneynaa aay badankoogu Mafia yihiin. Hade anuu ma moogi in diintu cago aay ku socoto iyo indho aanay lahayn. Laakin anuu murugo ayeey iila muuqadaa in aay bililiqeysteen kuwo dambiile yaal ah. Oo aay shacinayaan wixi lagu samayn lahaa ruuxi war ka keeno oo diida in uu hayin ahado. Waxaan u leeyahay Cilmaani ayaa diinta si saxa u caabudo igama aha in aan ahay lakin waxan ogaday. In aay kii ku xadgudbaa aay ceebtiisa tusayaan. Laakin iyagu qaladyada muslimka waay u keydsanyihiin. Marka muslim Mafio da wawayni is tidhaahdo ku kiciya hayinta daacadu ka tahay diinta. Ayeey inteey weerar qadaan debada soo dhigaan ceeb aanan awoodin in ruuxa dacadaahi arko. Kadibna wajaqadi iyo cuqdadi meesheedi ka sii miisantaa. Waxan inigu war gelin uun muslimka daacada ahoow hadaad walalihiina sida anoo kalaa ee awoda in aay runta shegaan er eryataan. Dee cilmaani ayaa kadimada ku sugayo oo masalo u fidinayo. Wanaagi uu idnkula hadlayeyna intaay sun ku walaqaan iyagoon idin kala saarin idiin isticmaali. Ugu dambayntiina tariikh dhalaankiinu ku jaha wareeraan ka iibin doonta. Meshaasina diintii ku milmi doontaa. Hadaad is tirahdan is difaacana jufo jufo afka isugu kiin gelin.Ileen jufooyin xurgufi ka wada dhexeyso weeyi umada muslimkaah. Iyagoo mucaawino sidana durbadiba idin la soo gaari. Sida marar badan dhacdayba. Ugu dambayna xumaanti iyo samanti xududihi u dhexeeyay ayaa meesha ka baxaya.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 15:00	I wish topicani inuu ina dhaafo Hiildan maanta miyuu seexday gabaygii aan wadaan idiin sii wadi maanta waan arkayaa meeshu way qasantay.
Reply ↓	Isaq Boy	June 21, 2012 • 15:05	Jow.
Niyow Timacade miskiin baad tahay oo malaha muraayadii indhaha ee akhriskaad u baahan tahay …meel yar uun bay kaaga dhagtay sidii dhagoolayaasha.. aanu ku nidhi cidiba iskuma haysato…
waxaanan saas kuu leeyahay waan ku arkayaa inaad barii’ daacad ah iska tahay.. oonad rumaysnayn waxay rumaysan tahay.. halkaad ka hadlayso iyo halkay wax marinaysaana waa kaaf iyo kala dheeri..
Ee dib u akhri naagtan aad hor boodayso een rumaysnaynba aakhiro ee ilaahay af lagaadaynaysa… arkaantii islaamkana ka soo qaadaysa wax ay carabi u samaysatay inay ku qadhaabato…
Ha igu noqon dhagax dixeed dhago xidhan oo kubad la hor laagay wali daba durdurinaya.. Waan ka baxay dood ku sheegan ma dhalayska ah…. Yartana nooceegoo kale dhowr jeer baan arkay oo kamanka isku meel bay ka tumaan.. afar dhibcood oo daalay oo biyo dhacay siday ugu soo celcelinayeena ma dhaafsiisna sheekoodudu.. mana dhaafto hadaad caawoo dhan is tidhaa u caqli celi…
ilaahay ha soo hadeeyo iyo anagaba..
Reply ↓	Isaq Boy	June 21, 2012 • 15:07	Hiildan
Yartan shaydaanku ka dhex hadlayo maad na dhaafisid niyow warkeeda… muslinkii wuu yaabee ood wax kale noo soo dhigtid.
Danbigeedana ilaahay hakaa sahlo… in gogoshaada ilaahay lagu af lagaadeeyo…
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 15:39	Sidda aynu ka wadda warqabno waxa la soo wariyaa in cunista geedka qaadka ee Soomaalidu markii uggu horesyey ay bilaabeen qaar ka mid ah culimmada Soomaali Galbeed oo u adeegsan jirey inay habeenkii ku soo jeedaan si ay u cibaadaystaan, markaas ka dib waxaa isticmaalkiisu u gudbey baabuur wadayaashii wadi jirey baabuurta xamuulka oo isaga kala gooshi jirey dalka Xabashida gaar ahaan degaanada Soomaalidu degto iyo Somaliland,
Wakhtigaas oo labada dhinacba ku sugnaayeen gacanta gumeystihii Ingiriis, Waxaana taariikhdu tilmaameysaa in dhinaca Somaliland ay bilawgii afartamaadkii cunista qaadka bilaabeen kooxo odayaal ah oo u adeegsan jirey inay ku sheekeystaan wakhtigooda firaaqada ah iyo markii ay shirayaan amma arrimo dhinaca dhaqanka la xidhiidha oo muhiim ah falanqeynayaan. Maxmiyadii Ingiriiska ee ka talin jirtey Somaliland (Somaliland British Protectorate) waxa ay qaadka dhulka Somaliland ka mamnuucdey laba jeer oo ku beegneyd bartamihii afartamaadkii iyo bilowgii kontamaadkii waxaana ay soo rogtey xeerar isugu jira xadhig iyo ganaax lacageed oo laggu fullinayo shakhsiyaadka laggu qabto iyaga oo Waddanka Somaliland soo gelinaya qaad amma cunaya iyo waliba haddii lagu soo qabto iyaga ka ganacsanaya iibinta qaadka, sidaas oo ay tahay haddana Soomaalidu uma ay dhago nuglaan baaqaas ballaadhan ee ka soo baxey Maxmiyadii Ingiriiska ee Somaliland wuxuuna qaadku dhulka ku soo gelli jirey si dhuumasho ah iyada oo lagu keeni jirey Dameero, waxaana dhici jirtey in marka ay ilaalada Ingiriisku qaadka koontarabaanka ah qabtaan la geyn jirey magaalada Barbara halkaas oo badda bartankeeda lagu daadin jirey, markase qaadku soo gallo gudaha magaalooyinka waa weyn ee Saylac, Borama iyo Hargeysaba waxaa lagu gadi jirey goobo qarsooodi ah, inkasta oo sidaan horey u soo sheegney dadka cunaa aad u yaraayeen hadda dadkaasi waxey ay ku cuni jireen qaadka meelo u gaar ah oo aan inta badan la ogaan jirin. Xaaji Raydal Warsame Geele waxa uu ka mid odayadii reer Awdal ee wakhtigaas caanka ahaa waxaana uu deganaa labada magaalo ee Saylac iyo Borama oo uu ku lahaa illo ganacsi oo buuran,
waxa uu ahaa gabayaa aad u xikmad badan oo aftahanimadiisa iyo ilbaxnimadiisu ka muuqatey fagaarayaasha kaftanka iyo sheekada ay ku wadaagi jireen odayadii hore ee reer Awdal, wakhtigaas Ingiriisku qaadka ka mamnuucey waddanka ayaa waxa dhacdey in maalin maalmaha ka mid ah Xaaji Raydal Warsame oo maraya barmataha magaalada Borama ay kulmeen odayaal ay kaftan wadaag ahaayeen kuwaasi oo rabey in sarajooga ay ku dhameystiraan sheeko u qabyo ahayd laakiin nin qaad sita oo qayilaad sugeyso kuma samo wacna sarajoog sheeko ee Xaaji Raydal Warsame markii ay Odayadii salaanta iska qaadeen cabaar yarna ay kaftameen ayuu dhaqaaq u holadey ka dibna jaaha iyo jidhka qeybtiisa hore ayuu sii jeediyey, markaas baa Caaqil Maax Dugsiiye oo ay saaxiibo ahayeen kana mid ahaa odayada ay wadda joogeen ee ay kaftamayeen isaga oo jecel in uu Raydal la sii joogo cimaamadii Xaaji Raydal garabka u sudhneyd badhna xusulka korkiisa ku hoose jirtey soo jiidey Maax Dugsiiye, dabadeedna waxaa dhulka ku dhacdey mijin jaada oo Xaaji Raydal sitey si uu galabtaas u cuno. Arrintaasi markii ay dhacdey ayaa dadkii golaha suuqa joogey soo urureen dabadaadna Xaaji Raydal Warsame ayaa yidhi Car yaa qaadan? oo uu ulla jeedey waa ayo qofka raganimo muujinaya ee u badheedhaya xadhig iyo ganaax lacageed oo mijintaas dhulka taala qaadanaya?
Xaaji Raydal Warsame wuu iska tagey ka dibna waxaa meeshii mijinta Jaadkii taaley yimmid ilaaladii magaalada ee booliska ahaa, waxey dadkii meesha joogey u sheegeen in mijintan jaadkii ka dhacdey Xaaji Raydal Warsame dabadeedna ciidamadii booliska ahaa waxey qaadeen mijintii jaadkii waxeyna geeyeen Saldhiga dhexe ee magaalada Borama oo ah kan immika jira ee dhakhtarka Borama ay jaarka yihiin. Taliyihii Saldhiga joogey ayaa loo dhiibey mijintii jaadkii ee bartamaha suuqa Borama laga soo qaadey waxeyna u sheegeen in uu iska leeyahay mijintan jaadka Xaaji Raydal Warsame dabadeed taliyihii Ingiriis waxa uu Xaaji Raydal u gooyey Waaran yeedhitaan ah si uu u yimmaado Saldhiga oo arrintan la xidhiidha dacwadiisa loo dhageysto, Xaaji Raydal Warsame wuxuu yimmid Saldhigii booliska dabadeedna waxaa bilaamantey dhageysiga kiiskan Xaaji Raydal loogu yeedhey ee loo haysto. Markii Xaaji Raydal Warsame lagu yidhi waxaas baa dhacey oo lagugu yeedhey wuxuu isku difaacey odhaah xikmad badan wadata oo aftahanimada ku dheehan ay tahay mid ka soo maaxdey maskax u dhalatey geesinimo taas oo aad jawaabteeda ka dheegan karto in dadka aadka u caqliga baddan ay isku noqan karaan Lawyer marka ay u baahdaan in arrin loo haysto iska difaacaan, Xaaji Raydal inta uu is dajiyey ayuu dabuub xikmadi ku ladhan tahay ku yidhi “Sir (mudane) bal waxaad weydiisaa booliskan kaa amar qaata ee amniga magaalada borama ilaaliya su,aasha ah mijintan jaadka ma gacanta Raydal baad ku soo qabateen mise dhul baad ka soo qaadeen? dabadeed taliyihii dacwada dhageysanayey ayaa amar ku siiyey in xafiiska ay ka baxaan dadka jooga oo dhan waxaan Xaaji Raydal Warsame ka ahayn, markii ay xafiiska isku soo hadheen taliyihii iyo Xaaji Raydal Warsame ayaa inta uu taliyihii qosol u dhacey Raydal Warsame ku yidhi Raydalow waad nagga badisee hoo mijintan jaadka, qaado oo ku mirqaan maalin dambase ha u noqon. Wakhtigaas ay qisadaasi dhacdey wax yar ka dib ayaa waxaa magaalada Borama soo gaadhey Badhasaabkii Ingiriis ee Hargeysa fadhiyi jirey oo magiciisa la odhan jirey David Reas kaas oo rabey in uu magaalada Borama keeno wafti ballaadhan oo ka yimmid England kuwaasi oo booqasho ku marayey dhulka Somaliland, maalintii uu imanayey waftigaas magaalada Borama waxaa dadkii joogey isku diyaariyeen si heer sare ah, waxaana banaanka weyn ee u dhaw seeraha Borama laga dhisey taandhooyin waa weyn, fardo baddan ayaa waftiga lagaga hor tagey waxaa loo soo galbiyey si diiran dadkii hawshaas agaasinkeeda hormuudka ka ahaa waxaa ka mid ahaa Caaqil Maax Dugsiiye oo ka mid ahaa maddax dhaqameedkii reer Awdal ee ilaahey ku maneystey caqli wanaagsan, tallo toosan iyo maskax caafimaad qabta oo arrimaha dhaqanka la xidhiidha ugu shaqeysa si hufan oo haboon. Waftigii markii ay soo gaadheen magaalada Borama waa loo ciyaarey, gabayo, geeraan iyo amaan intaba waa loo dhameystirey waxaana habeenimadii lagu hooyey taandhooyinkii loogu tallo galey kuwaasi oo garabkoodana laga dhisey aqal soomaali laba daryaale ah, waxa la tilmaamaa in aan wakhtigaas magaalada Borama aaney jirin warshad laydh oo magaalada shida laakiin waxaa jirey ileys bixiyaha loo yaqaano Maanshoo amma degaanada qaarkooda loogu yeedhi Tiriig, kaas baa la keeney oo la dhigey gudaha taandhooyinkii, odayadii uu Caaqil Maax Dugsiiye horkacey habeenkii waxey waftiga kula hoydeen halkaas hase yeeshee Caaqil Maax Dugsiiye oo ka mid ahaa Odayadii wakhtigaas qaadka cuni jirey maalintaas wuxuu haleel u waayey mijintii jaadka ahayd oo markii horeba uu hoosta uu ku sitey, waxaana dhacdey in markii la kala xeroodey Caaqil Maax Dugsiiye inta uu iska hoos fadhiistey Tiriigii shidmayey lugahana fidsadey ayuu mijintiisii jaadka ahayd la soo baxey waana iska mirqaamey si uu daalkii ka soo gaadhey dabaaldegii saaka iyo damaashaadkii maanta iskaga biiyo. Taliyihii u sareeyey ilaalada waftiga ayaa amar ciidamadii booliska siiyey wuxuuna u sheegey in ay guud ahaan soo hubiyaan amaanku in uu sugan yahay banaanka iyo gudaha taandhooyinkaba dabadeedna ilaaladii ayaa soo galey taandhadii uu ku jirey Caaqil Maax Dugsiiye waxeyna arkeen Caaqilkii oo jaad cunaya ka dibn inta ay fajac iyo yaab amakaageen ayey u yeedheen taliyihii waxaana ay dul keeneen Maax Dugsiye, taliyuhu waa ninka haysta saldhiga booliska ee magaalada Borama aqoon gaara ayaana ka dhaxeysa isaga iyo Maax Dugsiiye oo Caaqil Maax Dugsiiye waa oday caan ah oo Ingiriiska laftiisa kala shaqeeya arrimaha la xidhiidha dhinaca amniga taas oo cuqaasha lagu siin jirey mushaaro lacageed. Ninkii taliyiha ahaa muu odhan Caaqil Maax Dugsiiye qabtoo xidha ee wuxuu yidhi Maaxow horta ma ogsoon tahay in qaadku mamnuuc ka yahay dhulkan aad ku cuneyso? Caaqil Maax Dugsiiye oo aad u caqli badnaa wuxuu ku yidhi haa waan ogsoonahay oo waliba waxaan xog ogaal
u ahayn in qofka lagu qabto isaga oo cunaya amma iibinaya uu muteysanayo xadhig iyo ganaax lacageed, dabadeed taliyihii ayaa Maax Dugsiiye ku celiyey haddiiba aad sidaa u garaneyso maxaa cunistiisa kuu geeyey? Caaqil Maax Dugsiiye waxa uu yidhi horta adigu waxaad cabtaa khamriga waxaanad aaminsan tahay in aanu wax dhibaato ah kuu keeneyn, marka aad cabeyso khamriga waa marka aad hawlahaaga shaqo ka nasaneyso waxaanad rumeysan tahay in marka aad cabto uu kugu dhalinayo dareen farxad leh, hadaba haddii aan anaguna dadka Soomaaliyeed nahay sidaas oo kale ayuu qaadku noo yahay oo wax dhib ah naguma hayo markaan shaqooyinkayaga ka nasaneyno amma aan sheekaysaneyno ayaan cunaa. Taliyihii wuxuu aad ulla fajacey halka uu hadalka ka abaarey Caaqil Maax Dugsiiye wuxuuna ku celiyey hadalka oo uu yidhi hadaba Maaxow bahalkan dhib badan ayaa naga haysata ilaalintiisa iyo xakameyntiisa sidaas oo ay tahay baaqii aan soo saarney dadkii uma dhagalo nuglee maxaad tallo adigu soo jeedin lahayd? Caaqil Maax Dugsiiye oo maskaxdiisa caafimaadka qabta ee ilaahey ku maneystey iyo murtida wanaagsan ee lagu dhaley uga faa,iideynaya maddaxda maxmiyadii Ingiriiska wuxuu yidhi waxaan idiin hayaa tallo dhib yar oo aad u wanaagsan taas oo anagana faa,iido noo ah idinka dawlada ahna faa,iido weyn u ah. Caaqil Maax Dugsiiye waxa uu yidhi maanta laga bilaabo qaadka waad fasaxeysaan oo waxaad sharciyada mamnuuceysa in uu dhulka Somaliland soo gallo waxaadna sameyneysaa xarumo lagu cashuuro sidda meelaha uu ka soo gallo ee Awbare iyo Wajaale, cashuurtaasi waa mid iniga faa,iido idiinku jirto anagana si xor ah ayaan ku cuneynaa oo xornimo aad wax ku cunto faa,iido ka weyn ma jirto, hadalkaas uu go,aamiyey Caaqil Maax Dugsiiye ayaa noqdey mid dhaxalgal ah oo u cuntamey madaxdii Ingiriiska ee halkaas joogtey waxaana markiiba ay billaabeen in qaadku si xor ah u soo galo dhulka Somaliland isla markaana lagu Cashuuro magaalooyinka uu ka soo gallo ee Awbare iyo Wajaale. Fiiro Gaara: Waxaan u mahadcelinayaa sheekooyinkan odayadii iiga sheekeeyey oo ay ka mid yihiin Oday Maxamuud Cumar Miigane iyo Oday Xasan Cawaale Aw Ibraahim AUN. Abdirisaaq Mohamed Barkhad
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 15:50	GARTII RAYDAL WARSAME ,GO,AANKII MAAX DUGSIIYE IYO GUMAYSTIHII INGIRIIS EE JOOGI JIRAY DHULKEENA HOOYO.
Reply ↓	Tallman	June 21, 2012 • 15:54	Dhamaan waad salaamantihiin@Sahal war time badan ma hayo,oo breaktime baan ku jiraa,laakiin doodda abti waad dheeraysey,waxa aad weydiin laheyd”Your Opponent Prophet Muhammad” ma jeceshahay Yes or No and why aad Allah ugu tilmaantey in uu Janada dadka qabiil ku galiyo!Alshabaab this and that ama Carab baa saas sameysa ama Turks baa naago meel ku haysta topic gu maaha.Aduunku waa 6Billion dadka ku nool 1,400,000,000 oo qofna waa Muslims and still growing@Hanimuufo Jaahilad baad tahay si aan u difaaco”My Creator and Prophet Muhammad” ha ila qabsan from now@ Isaaq boy thanks@Timacadde,lagama hadlayo Ina Godane,Dirty Godane or Dirty uneducated people called”Alshabaab” The topic was The Islamic Universal Religion Islam,Allah,The Almighty and Prophet Muhammad” iyo wasakahad qaxooti ah oo caydey! PERIOD.@Hiildan mardambe hadal ama doodda aan halkan ka dhiibto ma jecli in islaantan la baxdey Hanni ee qabiil aaney aheyn sheeganaysa diintana caayaysa ay ila qabsato adaa ka masuula sxb.
Reply ↓	Aisha	June 21, 2012 • 17:07	lol alla iyaa ilaqosla
Reply ↓	HaniMuufo	June 21, 2012 • 17:19	Tallman kkkkkkkkkkk,
Adaan kaa haya Nabi maxamad wan jeclahay ahlu diina ma ihi walee waa yaab intiisa la eg. Bal nooga shekee waxyabaha aad ku jeceshahay adoon ba afarahayga gelin ileen igu garaadba ma tihid. Qabiilna gun ayaad ka tahay caqlina Doqon. Dadka walalahaa ah eed qabyalada ku kala dileyso uun raadso aniga noocagu melaan habeen marayna ma soo mari karan. Hadii aad is leedahay Mudane Hiildan waa MaxaadCase oo wuu ii Hiilinayaa hade waa kuu doqon nimo. Aduu isu hiili oo garaad lagu doodo soo baro hadii kale naga fariiso oday yohow huurada wayn kkkkkkkkk. Anagaad baby isaga kaaya dhigaysaa. Ina Miiiiicaaad baaa laaay yidhaah uuuuf. Waar socoo isku xishoo wixi lagu yidhaa waa qushigaa eh. Teeeelkaygu waaa kan. Huuno waqti aan kugu soo telefon garaynaba ma ahyno kkkkkkkkk. Oo maxaan kugu falaynaa adi iyo teelkagaba?. Walee nin atencion jecel baad tahay cid dan kaalehina ma jirtaa iska baroooro.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 17:22	LOOOOOOOOOOOOOOL.
HIILDAN KU MEE .
Reply ↓	Sahal	June 21, 2012 • 17:23	Timacade
Aniga kolay dhaqankayga maaha in aan idhaahdo hebel waa gaal iyo hebel waa muslim sobobtoo ah dee Rabi ayaa og odoomadiisa waxa laabahooga ku dhex jira. Gaalnimo iyo murtadnimo dadka lagu sheegaana waxan u haystay in ay ku gooni tahay Al-shabaab iyo inta ku fikirka ah ee isku haysta in ay furihii janadda iyo kii caddaabtaba gacata kuwada haystaan.
Waxase iga degi wayday sida ay kaaga suurta gashay in aad tidhaahdo “gaaladda samafalyaasha ayaa janadda uga horeynaya dad badan oo muslim sheeganaya”. Marka koowaad qof gaal ahi janadda ma,galayaa ama ha u horeeyo ama ha u dambeeyee? Diinta Islaamku, haddaanan khaldanayn, waxay qabtaa MAYA. Siddaa daraadeed waxan la yaabanahay dadkan ku qamaamsan Hani ee adiga taada u jeedin.
Dhibta Somaliyana diinta Islamku wax masuuliyada kuma laha ee dad Soomaaliyeed oo aqooni ku yarayn ayaa ka masuul ah.
Habo, waxaad moodaa in aad isku dhex yaacday oo meesha aad u socoto, waxa aad ka dagaalamayso iyo waxa aad u dagaalamaysaa ay isku qasmeen. Siddaa awgeed qoraalkaagan dambe wax badan kama fahmin lkn anigu kolay waxan difaaci doonaa in aad fikirkaado dhiibato oona afka lagu qaban siddii uu yidhi ninkii la odhan jirey Voltaire:” je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire.” oon macnaheeda ku turjimi karo waxan necebahay waxa aad qoraysid lkn waxan diyaar u ahay in aan u dhinto xaqa aad u leedahay in aad qortid. Lkn waxa daba taala xoriyadkastiba xadbay leedahay ee ha moogaan.
Midse ka qanci dadka waxa diinta Islamka iyo dhibta Somalia eed la,lilmaynaysid iskaga xidhan? Diinta Islamku ayadaaba victime ah oo dhibaato loogaysya sidaan anigu qabee.
Midkalena ku darsoo, waan ognahay in cayda iyo soo bandhigista dacaayadaha diinta Islamku ay tahay dariiqa ugu sahlan ee horumar ded-deg ah iyo magac aduunyo lagu helo dunidan aan maanta ku noolahay ee haddii taasi damac kaaga jiro meeshii ku haboonayd ma, joogtid.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 17:34	Sahal si wanaagsan ayaad u waanisay ilaahse ha ka dhigo ta qaadata ,Caasha adna anaa kula qoslay .
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 17:38	Okay let us Hang Hannimuufo ……….Hannimuufo naag xun baad tahay, waayo dadkii baad muraayad hortooda dhigtay and you show them in waxyaabaha ay sameeyaani ay un islamic yihiin, dee markaa madaama aad run sheeg tahay waa in lagu xayira, why…because you remind us that we are all sinner and worst yet you remind us that we may even be non-believers…..How dare you remind us of who we are!!!!!! we will throw alot of tantrums at you and we will not play with you and maybe we will take away all your toys……..and if you were in Somalia, we would have stone you to death but we are not and therefore we are sad….blah, blah, blah, what a rubbish.
Hadda maxaan yeelaa,ilay markaan hadda nidhaa, somaliland xuduudaheeda gaaladu xariiqday waa muqadas, waxad nagu odhan gaalo ayaad tihiin. Yes, gaal baad tahay hadaad xuduud u nin gaal ahi xariiqay ugu yeedho muqadas.
Hannimuufo…….do not waste your time on these bloody hypocrites.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 17:40	Waxaaban ku mashquulay Ugaasyo markaasan ilaawayba dhinacii kale geesiyadii Aadan Isaaq iyo tolwaynihii Samaroon ka badbaadiyay masiibadii waynayd maalintii badda lagu gurayay ayaa iyaguna ah rag la xasuusnaado mar walba la socda waan soo wadaa qoraaladaaas .
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 17:49	Sahal,
It is call Sarcasm.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 17:50	Timacade maanta generation kaagii ayaa igu soo dhacay Raydal Carabloo imikaadse is da,yarayn ood caruur iska dhigi, Hannmuufana beryahan si baad isku daba boodaan awguuriyaan idin leeyay.
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 17:51	I meant ” it is called Sarcasm” ma aqaani af somali waxa lagu yidhaa.
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 17:53	Only if you know my own beautiful stories of Raydal decendants……….kkkkkk kuu sheegi maayo, but it is mesmorizing…….
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 17:56	I am one of his decendants believe me .
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 17:59	OOPs!!!!!!! aan iska aamuso.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 18:00	Luqada carabiga waa mujaamala anba kuma xasuusto Somaliga Sahal.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 18:02	Timacade , ma xasuusata post card gabadh guntiino xidhan geed liina hoos joogta xabad liin macaanana kor u haysa ,sawirka Muqdisha lagu qaaday kkkk,.
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 18:20	Godan…Soo gali sawirka meeshan haddii aad hayso.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 18:25	Waa waqti hore mana hayo waxanse isku dayi inaan ka helo Somali pageska.Waa post card caana gabadhuna allaya raxma waad garan.
Reply ↓	Sahal	June 21, 2012 • 18:46	Timacade
Sarcasme ama Irony oo ah laba kalmadood oo aad iskugu macna dhow oo ayna fududayn xataa dhaqamada ama luqadaha reer galbeedka qaarkood in si fudud loo kala saaro, anigu waxan Af-soomali ahaan ku macnayn lahaa: “JEES-JEES SARBEEBAYSAN”, haddaan khaldanahayna waa la,sixi karaa khaladkayga.
Kolkaa “gaalaa janadda dad muslimiin aha uga horaynaysa” miyayna danbi ahayn? Horta, nin aqoon leh baad tahay lkn waxa jira wax dhaqamada qaar sax ku ah lkn midkale khalad ku ah ee bal halkaa iska hubso. In one word, Timacade, SARCASM isn´t it a sin in Islam?
Reply ↓	timacade	June 21, 2012 • 18:56	Ma hubo inuu sin yahay, waayo waa fikrad aad si dadban u dhiibanyso to prove a point. Lakiin, I will check it out, haday UN Islamic tahayna waan ka toobad keeni.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 18:53	Sahal diyaaradan maxaa la inoo dul dhigay ee loo badali laayay odagii xafiiskan furtayna xaguu ka dhacay, waar Sahal si baa la inoo seexinayaa waxbaa jira.
Reply ↓	Sahal	June 21, 2012 • 18:58	I mean “sarcasm like this meaning “gaalaa jannada muslimiin gafsan uga horaynaysa”
Allahu yaclam lkn aniga shiki ayay i galisay in sidaa qof muslim ahi u hadli akro, dabadeedna waa SARCASM, qiilka dhigto.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 19:02	Miigan ha la naga dulqaado plz.
Reply ↓	Sahal	June 21, 2012 • 19:05	Godan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk waa horaan ku arkay in aad dareen 6 aad leedahay kkkkkkkkkkkkkkk dee Hiildan ceebtii Saylici oo waxba ma, ogi haddal ku soo gabagabeeyuu la, dhuumanayaa, waana taan shalay ku qarxiyey lkn ma,isagaa dhegba jalaq u siiyay kkkkkkkkkkk
Bal eeg sidaad inabtiday Haboon iigu dirtay iminka kkkkkkkkkkk dhib baa laguu abuuray adigana.
Reply ↓	HaniMuufo	June 21, 2012 • 19:10	Timacade,
Kuwan iska dhaaf yeeysan ku ijaafayn. Aniga imana garanayan meel aay iigu soo hagagaana maba heli karaan oo gafuurkaan u xidhay sidi Alshababki adi waxay barito kugu eedayaan kii jufo heblaayo ka ahaa ee hebel hebelahaa ee heblaayo qabi jiray oo hebel iyo hebla dhalay ayaa naag Cilmaniyada nooga hiiliye. Anuu dadkan waa malintii iigu dambaysay een la hadli doono. Xafladi waan ku dul tuntay waligoodna i hilmami mayaan. Oo runtaan u sheegay ayaa soo hor joogsan doonto. Iyo beentey naftooda u shegeen. They will soffer to guilt feeling. Iyagoo afka kale we are proud to bi kkkkkk. Adna waan kuu mahadcelshay si aad oo wayn abaal nin galo moyee nin guda la waa. Sarcasm is “a sharp, bitter, or cutting expression or remark; a bitter jibe. Timacade huuno ogow aduun baa gartay quwadayda hahaha. Iyagoo sidaa ah ayaan baroortooda iyo dacartooda ku soo daadiyey halkan. Qadki dhamaa ee badawnimo ayaan ka saaray oo aan soo hordhigay laabtoodi iyo wajigoogi kkkk.
Aaaax yaa gobanimo ax yaa wadani Timacade.
Godan huuno iska miskiinad qalbi caruura ayaa tahay waana ku jecelahay tolerante nimadaada. Laakin Timcade wanigii kuu gujiye garabna kugu siiye. Isagoo godlan ayaad gaax ka dhigtay kkkkkk. Ani iyo Timacade jacayl waxaa naga dhexeeya qara wayn oo ka duwan kan nin iyo naagi iska raadshaan. Mudane Hiildan mahasanid. Ajarna ilahay hakaa siiyo sida aad ugu nimcaysay Badawiintan oo ilahay ha tuso in aay page kaaga wax duxi ka raacayso isu dhaafsadaan. Oo dibin daabyo iyo is bahdil dhaama.
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 19:16	Ximiro xin badan aniga igu daa yadba dhufays bay gashay ha ku jirto laga raysay, bal waan samraynaa lol intay soo baxayaan.
Reply ↓	Sahal	June 21, 2012 • 19:21	Habo Hani,
maanta waxbaa iskaa badalay ee waa sidee? Haddalkaagu mijo iyo madax ma,kala laha ee dhakhtarka aad sheegi jirtay ma,adaa jiifa mise waad ka shaqaysaa?
Allaha ku soo ururiyo waa halkii reer xamarkee
Reply ↓	godan	June 21, 2012 • 19:24	Caawa waad ii qubaysay kamaan helin doodii ina dhaaftay simply sidaasan uga gaabsaday ugana qayb gali waayay Somali waxay tahayna waa ummad aanan meela uga bixi karin sidoodan ku jeclay ,ku dhex gaajoon maysid, waa deeqsiyo ,bulsho dhamaystiran la waa waxanse qosla adoo Hawiye sheegta inaad wax u sheegto bulshooyinka ugu xadaarisan Soomaali.Ha moodin doqmo markaad waydo qof kuu jawaaba way ku xaq dhawrayaan umase maleeyo inaad wax dheertay sidaad isku haysato.
Reply ↓	habaaq	June 21, 2012 • 22:04	laa ilaah ilalaah mantana ma diintii ilahayba layska adhex arkay asturawal wala sahlanaye yarabi cimrigaagoo raga shirnbir geeldhalayna wuu ku tusi kkkkk walee yabay
Reply ↓	Timacade	June 21, 2012 • 22:48	For you Hannimuufo for you are the LONE FIGHTER……By Blessing Ekpe adjusted for Gender
whether she fails alone
whether she fights lone
whether she swims alone
And sails alone
Decisions made in her vineyard
Being a lone fighter, All are hers.
She is a servant of God
She is a born radical
She is a defender of the truth
She is but a stammerer
She is only but a lone fighter
Whether others choose to cooperate with her
Whether others give a helping hand
Whether others choose to hate her or love her
She is unmoveable by an opposing gang
For she is a lone fighter!
She is a women of her words
She is a warrior of great repute
She is a being of humble guts
She is a women of high motivation
But she is a lone fighter! Not that she is a loner
Nor an enemy of the multitude
Not that she is a scorner
Nor a blood sucker
For she loathes bloody hypocrites
That is why, she is a lone fighter!
Reply ↓	Abdi aw dahir	August 25, 2012 • 13:33	horta ilaahey waxaan ka baryayaa inuu san koonfurta waxa isugu kaaya darin .
Reply ↓	togaherer	October 20, 2012 • 22:28	WAAR IS KA AAMUSA DHEH IIMANKA ALLE HAYDINKA QAADEE NIN KASTABA HALKUU U DHASHAY AYUU TAGAYAA CUDUR HARGAYSA JACAYL LAYIDHAAHDO AYAA KU DHACAY REER BARIGII HABARYONIS IYO HABRJECLO WAAR SIDAA REER BOORAMAE MAGAALADIINA DHISTA OO KA SHAQAYSTA HARGAYSA UMAYDUN DHALANE